ကိုပီတာရဲ့အတွေးပုံရိပ်များ: November 2009
သက်ဆုံးတိုင်ထာဝရ.... Eternally together
သူတို့ ခေတ်တုံးကတော့ ....ပြိုင်စံမပေါ်...နာမည်ကျော်ပေါ့ ....
ကွယ်လွန်သွားခဲ့ ပြီဖြစ်တဲ့ နာမည်ကျော်ရုပ်ရှင်မင်းသမီးမာရီလင်မွန်ရိုးရဲ့ အရိုးပြာအိုးကိုမြုပ်နှံထားတဲ့ 
နေရာရဲ့ အထက်မှာသူကွယ်လွန်ခဲ့ ရင်သူ့ ရဲ့ အရိုးပြာအိုးကိုမြုပ်နှံချင်တဲ့ မွန်ရိုးကိုစွဲလန်းသူ ( Monroe
Crazy ) တစ်ဦးဟာထိုနေရာအတွက်ရောင်းချတဲ့ လေလံပွဲမှာစံချိန်တင်ပြီးဒေါ်လာ ၄.၆ သန်းနဲ့ ပေး
၀ယ်သွားခဲ့ တယ်လို့ ဆိုပါတယ်....
လော့ စ်အင်ဂျလိ မြို့ က Westwood Memorial Park မှာရှိတဲ့ အဆိုပါမွန်းရိုးရဲ့ အရိုးပြာဂူအထက်က
အထူးသီးသန့် နေရာကိုအခုလိုဒေါ်လာ ၄သန်း ၆ သိန်းကျော်ပေးပြီးဝယ်ယူသွားသူဟာမည်သူမည်ဝါ
ဖြစ်တယ်ဆိုတာအတိအကျတော့ မဖော်ပြခဲ့ ပါဘူး....
အဆိုပါသင်္ချိူင်းနေရာမှာယခင်မြုပ်နှံခဲ့ သူ Richard Poncher ရဲ့ အရိုးအိုးကိုသူ့ ရဲ့ ဇနီးကဖယ်ရှား
ပြီးအဲဒီနေရာကိုရောင်းပြီး နာမည်ကျော် Beverly Hills အရပ်ကအိမ်အတွက်ကုန်ကျငွေ ၁.၆ သန်း
ကိုပေးဆပ်ဖို ငွေလိုအပ်နေလို့ အခုလိုပြုလုပ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့ ....
လွန်ခဲ့ တဲ့ သြဂုတ်လ ၁၄ ရက်နေ့ ကကျင်းပခဲ့ တဲ့ အွန်လိုင်းလေလံတင်ပွဲရဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ဖြစ်တဲ့E-bay
ရဲ့ ပြောခွင့် ရပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ ကြမ်းခင်းဈေးဒေါ်လာ ငါးသိန်းနဲ့ စခဲ့ တဲ့ အဆိုပါတစ်မူထူးခြားတဲ့ သင်္ချိူင်း
နေရာရဲ့ အရောင်းအ၀ယ်ကိုအတည်ပြုပြောဆိုဖို့ ငြင်းဆန်ခဲ့ ပါတယ်...
အဆိုပါနေရာကိုစိတ်ဝင်စားပြီးဈေးခေါ်သူပေါင်းနှစ်ဆယ့် တစ်ဦးရှိခဲ့ ပြီးနောက်ဆုံးရရှိသွားသူကတော့ 
‘O***S’ ဆိုတဲ့ အမည်ဝှက်နဲ့ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်...
” ဟောဒီ နာမည်ကျော်မာရီလင်မွန်ရိုးရဲ့ ဂူအထက်ကအထူးနေရာမှာသင့် ရဲ့ အရိုးပြာထာဝရနား
နေအိပ်စက်နိုင်မယ့် တစ်သက်မှာတစ်ခါသာရနိုင်မယ့် အထူးအခွင့် ရေးပါပဲ.....” လို့ အဆိုပါအင်တာ
နက်စာမျက်နှာမှာကြေငြာထားခဲ့ ပါတယ်တဲ့ ....
အဆိုပါနေရာရဲ့ မူလမြုပ်နှံခဲ့ သူလွန်ခဲ့ တဲ့ နှစ်ဆယ့် သုံးနှစ်ကကွယ်လွန်သွားခဲ့ တဲ့Mr Poncher ရဲ့ 
ဇနီးအသက် ၈၁ နှစ်အရွယ်ရှိ Elsie Poncher ကသူမရဲ့ ခင်ပွန်းဟာအဲဒီနေရာကိုမွန်ရိုးရဲ့ ခင်ပွန်း
ဟောင်းနာမည်ကျော်ဘေ့ စ်ဘောကစားသမား Joe DiMaggio ဆီက ၁၉၅၄ ခုနှစ်က၀ယ်ယူခဲ့ ပြီး
သူ့ ကိုအဲဒီနေရာမှာမြုပ်နှံဖို့ စိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန်တောင်းဆိုချက်ကို ပြောပြခဲ့ ပါတယ်...
” သူသေဆုံးပြီးတော့ အဲဒီမွန်ရိုးရဲ့ အုတ်ဂူအထက်ကနေရာမှာသူ့ ကိုမမြုပ်နှံခဲ့ ယင် ကျွန်မကိုတစ်သက်
လုံးခြောက်လှန့် နေမှာ...” လို့ သူကပြောခဲ့ တယ်လို့ ဆိုပါတယ်...
ချီကာဂိုမြို့ ကမြေအောက်လူဆိုးဂိုဏ်းသာတွေနဲ့ အဆက်အသွယ်ရှိတဲ့ စီးပွားရေးသမားတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ 
Mr. Poncher ဟာအခုသူ့ ကိုမြုပ်နှံခဲ့ တဲ့ မွန်ရိုးရဲ့ အထက်ကနေရာရဲ့ နေရာရဲ့ အပေါ်မှာလည်းနေရာ
တစ်ခုထပ်ဝယ်ခဲ့ သေးတာမှာအဲဒီနေရာကိုသူ့ မိန်းမကသူ့ အရိုးအိုးကိုထပ်ရွေ့ ဖို့ စီစဉ်လိုက်တာဖြစ်
အသက် ၇၀ ကျော်လို့ သာသိထားရသည့် အဆိုပါမုဆိုးမအဘွားအိုကတော့ သူကွယ်လွန်ယင်မီးရှို့ 
သင်္ဂြိုလ်ပေးစေချင်ပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်...
အဆိုပါမွန်ရိုးရဲ့ အုတ်ဂူအနီးနားမှာမြုပ်နှံချင်သူတွေဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာလွန်ခဲ့ ၁၉၉၂ ခုနှစ်တုံးက
နာမည်ကျော်ပလေးဘွုိင်းမဂ္ဂဇင်းပိုင်ရှင်တည်ထောင်သူ Hugh Hefner ကသမရဲ့ အုတ်ဂူဘေးကနေ
ရာကိုဒေါ်လာ ၇၅၀၀၀ နဲ့ ဝယ်ယူခဲ့ တာကဖော်ပြနေပါတော့ တယ်....
အင်း....ပုထုဇန္တောဥမ္မတ္တကော ဆိုသလို.....လူအားလုံးဟာတစ်မျိူးမဟုတ်တစ်မျိူးရူးနေကြ
ကိုယ်သေပြီးသွားလို့ ဘာမမရှိ၊မသိတော့ တာတောင်အစွဲအလမ်းတွေကရှိနေကြတုံးပါပဲ....
အမှန်ဆိုအဲဒီလိုသိန်းသန်းချီတဲ့ ငွေတွေကိုဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေသူတွေကိုထောက်ပံ့ ပေးကမ်းလိုက်
Spending eternity on top of Marilyn Monroe has cost one lucky bidder $4.6 million, according to online auction web site eBay, which ann-ounced the winning bid for the burial crypt directly above the movie star.
It was not immediately clear who made the winning offer of $4,602,100 for the privileged spot in Westwood Village Memorial Park in Los Angeles.
The plot is being vacated by its current occupant, Richard Poncher, whose widow made the prime resting place available in order to pay off her
$1.6 million Beverly Hills home.
An eBay spokesperson was not available to confirm the extraordinary auction, which began on August 14 with bidding beginning at $500,000.
Twenty-one offers in total were received, with the winning bid posted at 9.15am on Monday under the pseudonym ‘O***S’.
“Here isaonce inalife-time and into eternity opportunity to spend your eternal days directly above Marilyn Monroe,” the posting on the web site described the property as.
Elsie Poncher, whose husband died 23 years ago aged 81, had told the Los Angeles Times that he had bought the space in 1954 from Monroe’s ex-husband, baseball star Joe DiMaggio, and that she had complied with Poncher’s dramatic, if cheeky demand about how he was to be buried.
“He said, ‘If I croak, if you don’t put me upside down over Marilyn, I’ll haunt you the rest of my life’,” she said in the Times.
Richard Poncher,abusinessman well-connected to the Chicago mafia, also bought the spot one space over, which is where Elsie plans to relocate him to.
The widower, who won’t give her age but admits she is over 70, says she wants to be cremated when she dies.
Being buried close to Monroe has already provedadraw for some, with Playboy magazine founder Hugh Hefner purchasingaspot to the side of the sex-symbol’s for $75,000 in 1992.
Posted by Unknown | at 10:27 AM |2comments
Labels: ;, news
ကမ္ဘာ့ အရပ်အရှည်ဆုံးမော်ဒယ်ပါတဲ့့....
သိပ်မရှည်ပါဘူး...၆ ပေနဲ့၇ လက်မ ပဲမြင့် ပါတယ်....
ဘယ်သူ့ အားကိုးနဲ့ များဒီလောက်ရှည်နေပါလိမ့် 
လုမယ်တော့ မကြံလေနဲ့ .....
Posted by Unknown | at 10:46 AM |5comments
Proud to be Myanmar....
မြန်မာပြည်မှာရှိနေခဲ့ တဲ့ အချိန်ကပဲနည်းလို့ လားတော့ မသိ...
သူတို့ ပြောနေ၊ ဆိုနေ၊ ကနေတာတွေကတော့ မျက်စေ့ ထဲနည်းနည်းလေးမှ ကြည့် လို့ မရပါ....
သံစဉ်ကိုတော့ နားထောင်လို့ ရနေဆဲ၊ ကြိုက်နေဆဲမို့ ကိုယ့် ကိုယ်ကိုတော့ သိပ်ခေတ်နောက်
မူရင်းသီချင်းက ရုန့် ရင်းကြမ်းတမ်းသမျှ ကို ရွှေမြန်မာအနုပညာရှင်များကလည်းအားကျမခံ
ဒီလိုပုံ၊ ဒီိလိုအချိူးနဲ့ ဆိုယင်ဖြင့် .....
မျိူးချစ်စိတ်နှင့် ဇာတိမာန်ထက်သန်ရေးဆိုတဲ့ နေ့ စဉ်ထုတ်ဟာသစာစောင်ပါ ဦးတည်ချက်
များကတော့ပရုတ်လုံးလို လုံးပါးပါးတော့ မည်သာ....
ရွှေပြည်တော် အနာဂတ်အရေးကတော့ ရင်လေးမိတော့ သည်သာ....
Posted by Unknown | at 11:14 AM | 10 comments
ကွယ်လွန်ခဲ့ ပြီဖြစ်သော ခရစ်ယာန်သာသနာပိုင် ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ဂျွန်ပေါ ဟာ သူကျူးလွန်ခဲ့ မိ
တဲ့ အပြစ်တွေအတွက် နောင်တရတဲ့ အနေနဲ့သူ့ ကိုယ်သူ ကြိုး၊ ကြာပွတ်နဲ့ ရိုက်လေ့ ရှိခဲ့ ပါတယ်
လို့ ပိုလန်သူ သီလရှင် Tobiana Sobodka က စိတ်ထိခိုက်စွာနဲ့ ထုတ်ဖော် ပြောကြားခဲ့ ပါတယ်....
၂၀၀၅ ခုနှစ်မှာ ကွယ်လွန်ခဲ့ တဲ့ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ဂျွန်ပေါ ကို သူ့ ရဲ့ စင်ကြယ်မြင့် မြတ်တဲ့ အ
ကျင့် သီလ၊ စွမ်းဆောင်မှုများကြောင့်ခရစ်ယာန်သာသနာရဲ့ အမြင့် ဆုံး၊ အစွမ်းကုန်ဆုံးချီးမြှောက်
မှု အနေနဲ့မြင့် မြတ်တဲ့ သူတော်စင်အဖြစ် သတ်မှတ်ပေးဖို့စဉ်းစားစီစဉ်နေကြပါတယ်...
အခုလိုမြင့် မြတ်စင်ကြယ်တဲ့ သူတော်စင်အဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်ဖို့ အတွက် ခရစ်ယာန်သာသနာရဲ့ 
အမြင့် ဆုံးအာဏာပိုင်အဖွဲ့ အစည်းဖြစ်တဲ့ ဗာတီကန်နန်းတော်အနေနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ အတွက်
အထောက်အထားပေါင်း၊ ထောင်ပေါင်းများစွာ စုဆောင်းရရှိထားခဲ့ ပါတယ်...
ထိုအထောက်အထားမြောက်များစွာတွေထဲက တစ်ခုကတော့ အထက်မှာဖော်ပြခဲ့ တဲ့ပိုလန်နိုင်
ငံသူ ယေရှုခရစ်ရဲ့ မြင့် မြတ်သော နှလုံးသား အသင်းတော်ဝင်သီလရှင် Tobiana Sobodka ရဲ့ 
သူမဟာ ဗာတီကန်မှာရှိတဲ့ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးဂျွန်ပေါ ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်သီးသန့် နေထိုင်ရာအဆောင်
နဲ့ ရောမမြို့ အနီးက Castel Gandolfo မှာရှိတဲ့ နွေရာသီ စံအိမ်တော်များမှာ ရဟန်းမင်းကြီးအ
တွက် ကူညီလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ သူဖြစ်ပါတယ်....
” အကြိမ်တော်တော်များများမှာကို သူ ( ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ) ဟာ သူ့ ကိုယ်သူ၊ သူ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို
တမင်တကာ ထိခိုက်နာကျင်စေခြင်းဖြင့် သူပြုခဲ့ မိတဲ့ အပြစ်တွေ ပြေလျော့အောင် ပြုလုပ်ခဲ့ 
တာပါ.....“ လို့သီလရှင် Sobodka ကပြောပြခဲ့ ပါတယ်....
” Castel Gandolfo စံအိမ်မှာ သူနေတဲ့ အခန်းရဲ့တစ်ခြားဘက်အခန်းမှာရှိနေတဲ့ ကျွန်မတို့ 
ဟာ သူ့ ကိုယ်သူ ထိခိုက်နာကျင်စေတဲ့ ( ရဟန်းမင်းကြီး ကိုယ့် ကိုယ်ကို ကြာပွတ်နဲ့ ရိုက်နေ
တာ ) အသံတွေကို ကြားခဲ့ ရပါတယ်....
အဲဒီလိုသူ့ ကိုယ်သူအပြစ်ပေးနေတာကို အနီအနားမှာရှိတဲ့ ဘယ်သူမဆို ကြားနေနိုင်တာပဲလေ....
သူဟာ သူ့ ကိုယ်သူအပြစ်ပေးတာကို သူသွားလာလှုပ်ရှားနေနိုင်တဲ့ အချိန်ကာလအထိကို ပြု
လုပ်နေခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်...” လို့သီလရှင်ကြီးကဆက်ပြောပါတယ်...
ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးအနေနဲ့အခုလိုကိုယ့် ကိုကိုယ်အပြစ်ပေးပြီး ထိခိုက်နာကျင်စေခြင်းဖြင့် အ
ပြစ်တွေပြေလျော့ ပပျောက်အောင်ပြုလုပ်နေခဲ့ တာကို ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးရဲ့ ကိုယ်ရေးအတွင်း
ရေးမှူးအဖြင့် နှစ်အတန်ကြာလုပ်ခဲ့ တဲ့ ခရစ်ယာန်ဂိုဏ်းအုပ်ဘုန်းတော်ကြီး Emery Kabongo
ကလည်း အတည်ပြုပြောဆိုခဲ့ ပါသေးတယ်...
” အထူးသဖြင့် ဂိုဏ်းအုပ်ဘုန်းတော်ကြီးတွေ၊ ဘုန်းတော်ကြီးတွေကို ခရစ်ယာန်သာသနာထဲ
ကိုသွတ်သွင်းချီးမြှောက်၊ အဆင့် မြှင့် ပေး၊ ဆုံးဖြတ်ပေးတာတွေ မပြုမီတိုင်းမှာ သူဟာ သူ့ 
ကိုယ်သူ ( အပြစ်သားတစ်ယောက်အနေနဲ့ ) အပြစ်ပေးလေ့ ရှိပါတယ်...
ဂိုဏ်းအုပ်၊ ဘုန်းတော်ကြီးတွေကိုဖြူစင်မြင့် မြတ်စင်ကြယ်မှုမင်္ဂလာတွေကို ကူးပြောင်းမပေး
ခင်မှာ သူဟာသူ့ ကိုယ်သူ သန့် ရှင်းစင်ကြယ်အောင်ပြင်ဆင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်....” လို့ 
ဘုန်းတော်ကြီး Emery Kabongo ကပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
” ကိုယ်တိုင်တော့ တစ်ခါမှမတွေ့ ဘူးသေးပါဘူး ဒါပေမယ့် လူတော်တော်များများကတော့ 
ဒီအကြောင်းကိုလာလာပြောကြတယ်...” လို့ သူကဆက်ပြောပြခဲ့ ပါတယ်...
တရားဝင်မဟုတ်ပဲထွက်ပေါ်လာတဲ့ သီလရှင်ကြီး Sobodka ရဲ့ ဖွင့် ဟပြောဆိုချက်များကိုတော့ 
အီတလီနိုင်ငံသတင်းစာတစ်စောင်ဖြစ်တဲ့La Stampa မှာဖော်ပြထားခဲ့ ပြီး အဆိုပါပြောကြား
ချက်များဟာ ဗာတီကန်က သတင်းထောက်များ ရေးသားထုတ်ဝေမယ့် ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ဂျွန်
ပေါ ( ၂ ) အကြောင်းစာအုပ်ထဲမှာလည်းပါရှိမှာဖြစ်ပါတယ်...
အခုလိုကိုယ့် ကိုကိုယ်ထိခိုက်နာကျင်စေပြီးအပြစ်တွေလျော့ ပါး၊ ပပျောက်အောင်ပြုလုပ်တာ
မျိူးကို ခရစ်ယာန်ကသလစ်ဘာသာဝင်များကပြုလုပ်လေ့ ရှိပြီး သူတို့ အနေနဲ့ ယေရှုခရစ်
တော်ဟာ ရောမသားတွေလက်ထဲမှာ လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာကားစင်တင်မခံ၇ ခင်အချိန်အတွင်း
ကြာပွတ်ဖြင့် ရိုက်နှက်၊နှိပ်စက်ခြင်းခံ ခဲ့ ရတာကို သတိတရအမှတ်ရနေစေဖို့ လည်းရည်ရွယ်
ထို အလေ့ အထဟာ ယခုထက်တိုင် ဖိလစ်ပိုင်နဲ့ လက်တင်အမေရိက ဒေသက ဘုရားရှိခိုး
ကျောင်းများနဲ့ ခရစ်ယာန်ဘာသာကိုးကွယ်ယုံကြည်သူ ဘာသာဝင်များရဲ့ အဖွဲ့ Opus Dei
( ကမ္ဘာကျော်စာရေးဆရာ Dan Brown ရဲ့ နာမည်ကျော် Da Vinci Code မှာပါဝင်တဲ့ 
ရှေးဟောင် ခရစ်ယာန်ဘာသာရေးအဖွဲ့ ) တို့ မှာအများစုကဆက်လက်ကျင့် သုံးနေကြဆဲဖြစ်
ခရစ်ယာန်သာသနာပိုင် ဗာတီကန်က ကန့် ကွက်ရှုတ်ချခဲ့ တဲ့ အဆိုပါနာမည်ကျော်ရုပ်ရှင်ထဲမှာ
Opus Dei အဖွဲ့ ဝင် လူသတ်သမားဘုန်းတော်ကြီး Sila ဟာ သူ့ အပြစ်တွေကြေစေဖို့ ဒူးထောက်
ပြီးဆုတောင်းခန်းမှာ သူ့ ရဲ့ ကျောပြင်ကို သွေးထွက်အောင်ကြာပွတ်နဲ့ ရိုက်ပြီးသူ့ ကိုယ်သူအပြစ်
ပေးတဲ့ သရုပ်ဆောင်အခန်းတောင်ပါခဲ့ ပါတယ်...
” ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးကို မြင့် မြတ်စင်ကြယ်တဲ့ သူတော်စင်အဖြစ်သတ်မှတ်ဖို့ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေ
ဟာလျှိူ့ ဝှက်အဆင့် မှာပဲရှိနေသေးတာမို့ နောက်ဆုံးအစီရင်ခံချက်ကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်းမပြုမချင်း
မည်သည့် သဘောထားမှတ်ချက်မှမပေးနိုင်ကြောင်း...” ဗာတီကန် ရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့် ရှိသူကပြော
” စုံစမ်းမေးမြန်းခဲ့ တဲ့ သီလရှင်ဟာ ပိုလန်နိုင်ငံကိုပြန်သွားခဲ့ ပြီး သူမအနေနဲ့ စုပေါင်းဝတ်ပြုဆု
တောင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့ တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်...သူမက ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးရဲ့ သီးသန့် အဆောင်မှာ
ကူညီလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ ဖူးတာဖြစ်ပါတယ်...” လို့ သူကဆက်ပြောပါတယ်...
သူတော်စင်အဖြစ်သတ်မှတ်ညှိနှိုင်းရေး အသင်းတော် အနေနဲ့ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးဂျွန်ပေါ ကွယ်
လွန်သွားခဲ့ ချိန်ကတည်းကစပြီး သူ့ ရဲ့ သူမတူတဲ့ ကိုယ်ကျင့် သီလနဲ့ ဆောင်ရွက်ချက်များကြောင့် 
သူ့ ကိုသူတော်စင် Saint အဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက်စုံစမ်းမေးမြန်းစစ်ဆေးနေခဲ့ ပြီး တွေ့ ရှိ
ချက်များကိုလည်း လက်ရှိပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးဖြစ်သူ ဂျာမာန်နိုင်ငံသား Pope Benedict XVI ဆီကို
ကွယ်လွန်သူ ပိုလန်နိုင်ငံသား ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးဂျွန်ပေါ ကို သူတော်စင်ဖြစ်ကြောင်း လက်ရှိပုပ်
ရဟန်းမင်းကြီး ဘင်နက်ဒစ် ကထုတ်ပြန်ကြေငြာတဲ့ ပွဲကိုတော့ လာမယ့် နှစ်ဧပြီလလောက်မှာ
သူကွယ်လွန်ခဲ့ တဲ့ ငါးနှစ်မြောက်နှစ်ပါတ်လည်နဲ့ တိုက်ဆိုင်ပြီးပြုလုပ်ကောင်းပြုလုပ်နိုင်ပါလိမ့် 
မယ်။ အကယ်၍အဲဒီလမှာ မလုပ်ဖြစ်ခဲ့ ယင်တော့ သူပုပ်ရဟန်းမင်းအဖြစ် ၁၉၇၈ ခုနှစ်အောက်
တိုဘာလမှာ ရွေးချယ်ခံခဲ့ ရတဲ့ အထိမ်းအမှတ်နှစ်ပါတ်လည်အဖြစ် အောက်တိုဘာ လမှာကျင်း
ပပြုလုပ်လိမ့် မယ်လို့ မျှော်လင့် ထားကြပါတယ်...
အခုလို သူတော်စင်အဖြစ်လက်ရှိပုပ်ရဟန်းမင်းကကြေငြာတာဟာ လူအများအနေနဲ့ သူတော်စင်
ကြီးအဖြစ် ၀တ်ပြုဆုတောင်းနိုင်ဖို့ အတွက် သာသနာရဲ့ အမြင့် ဆုံးအာဏာပိုင် ဗာတီကန် အနေနဲ့ 
အတည်ပြုဆုံးဖြတ်ပေးတဲ့ အဆင့် တွေထဲက ပထမဦးဆုံးအဆင့် ပဲဖြစ်ပါတယ်...
ပုပ်ရဟန်းမင်းတွေကို မြင့် မြတ်တဲ့ သူတော်စင်အဖြစ် သတ်မှတ်ချီးမြှောက်နိုင်ဖို့ ကတော့ သူတို့ 
ရဲ့ မြားမြောင်လှတဲ့ တာဝန်၊ ၀တ္တရားများနဲ့ ကက်သလစ်သာသနာရဲ့ ခေါင်းဆောင်အဖြစ် တာဝန်
ယူဆုံးဖြတ်ရတာတွေ အတွက် စုံစမ်းစစ်ဆေးရတာမို့အချိန်ကာလ ပိုမိုကြာညောင်းတတ်ပါတယ်....
သို့ သော်လည်းပဲ လက်ရှိုပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ဘင်နီဒစ် ကတော့ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ဂျွန်ပေါ ရဲ့ သူ
တော်စင်အဖြစ် သတ်မှတ်ရေးဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုတော့ တတ်နိုင်သမျှမြန်မြန်ဆောင်ရွက်ပေး
ယခင်က အခုလိုသူတော်စဉ်အဖြစ်ကြေငြာနိုင်ဖို့ အစီအစဉ်တွေစတင်နိုင်ဖို့ တောင်အချိန် ငါးနှစ်
လောက်စောင့် ရတာကို ယခုပုပ်ရဟန်းမင်း ဂျွန်ပေါအတွက် ထိုစည်းကမ်းကို ပယ်ဖျက်လျော့ 
ပေါ့ ပေးခဲ့ ပါတယ်...
၂၀၀၅ ခုနှစ်မှာ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ဂျွန်ပေါ ကွယ်လွန်ခဲ့ တာနဲ့ ယုံကြည်သူအမြောက်အများဟာ
ရောမမြို့ ကစိန့် ပီတာ ရင်ပြင်မှာစုရုံးရောက်ရှိခဲ့ ကြပြီး သူတော်စင်အဖြစ် ချက်ချင်းသတ်မှတ်
ပေးပါ လို့ တောင်းဆိုတဲ့ စာတမ်းတွေနဲ့ သူတို့ ရဲ့ ဆန္ဒကိုဖော်ပြခဲ့ ကြပါတယ်...
ကွယ်လွန်ပြီးနောက် ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးဂျွန်ပေါရဲ့ အံ့ သြဖွယ်တန်ခိုးတော် များနဲ့ပါတ်သက်လို့ လည်း
အစီရင်ခံ၊ သတင်းပေးပို့ ချက်များဟာ ရောမမြို့ ၊ ဗာတီကန် ကိုအပတ်စဉ်ပဲရောက်ရှိလို့ လာနေပါ
အခုလောလောဆယ် စုံစမ်းစစ်ဆေးနေတဲ့ အဓိကအချက်တစ်ခုကတော့ အသက် ၄၇ နှစ်အရွယ်
ရှိ ပြင်သစ်သူ သီလရှင် Marie Simon ဟာ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ဂျွန်ပေါကို တိုင်တည်ပြီးဝတ်ပြုဆု
တောင်းခဲ့ ရာ သူမမှာဖြစ်ပွားနေခဲ့ တဲ့ အကြော အားနည်းပြီး ခြေလက်များတုန်ကာအကြောဆွဲ
သောရောဂါမှသက်သာပျောက်ကင်းခဲ့ တယ်ဆိုတဲ့ ပြောကြားချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်....
အဆိုပါရောဂါကို ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ဂျွန်ပေါကိုယ်တိုင်ခံစားခဲ့ ရတာဖြစ်ပါတယ်...
( သူကိုယ်တိုင်ကတော့ အဆိုပါရောဂါပျောက်တယ်လို့ မပြောကြားခဲ့ ၊ မဖော်ပြခဲ့ ပါဘူး...)
Pope John Paul II regularly whipped himself inasign of 'remorse for his sins,'anun has sensationally revealed.
The flagellation is also confirmed by another bishop who has given testimony Emery Kabongo, who for several years wasasecretary for Pope John Paul.
Sister Sobodka's leaked statements were published in Italian newspaper La Stampa and are part of new book on Pope John Paul II by it's Vatican correspondent.
It is still common in the Philippines and Latin America, some members of strict monastic orders and some members of the lay organization Opus Dei - who feature in the Dan Brown blockbuster The Da Vinci Code.
TodayaVatican spokesman said: 'The investigation and documentation is still secret and as such we can make no comment on it until the final report is published.
Beatification is the first step in becomingasaint and in order to be granted evidence ofamiracle performed by praying to the candidate in question has to be proved and verified by the Vatican.
In the case of Popes the procedure is usually much longer because the Vatican must examine much more material given the mass of responsibility and decisions taken by them as leaders of the Catholic Church.
Posted by Unknown | at 4:31 AM | 1 comments
Labels: news : daily mail
10,000 faithful disappointed as Virgin Mary fails to show
ဒီကျောင်းမှာ ကိုယ်ထင်ပြမယ်လို့ ....
အိုင်ယာလန်နိုင်ငံ Knock Basilica တွင် ယေရှုခရစ်တော်၏မယ်တော်၊ အပျိူစင်မယ်တော်မေရီ
ကိုယ်ထင်ပြမည်ဟု ယုံကြည်ကာမျှော်လင့် စောင့် စားသူပေါင်း တစ်သောင်းကျော် ဟာ သူတို့ 
ထင်ထားသလိုဖြစ်မလာခဲ့ ၊ မယ်တော်က ကိုယ်ထင်ပြမလာ သောဘေကာင့် စိတ်ပျက်၊လက်
ပျက်ဖြစ်ခဲ့ ရကြောင်း ဆိုပါသည်....
အိုင်ယာလန်နိုင်ငံ စံတော်ချိန် နေ့ လည် ၃ နာရီလောက်မှာတော့ယုံကြည်သူပေါင်း ၇၀၀၀
ခန့် ဟာ Basilica ကျောင်းဝန်းထဲကို စုပြုံတိုးဝှေ့ဝင်ရောက်ခဲ့ ကြပြီး ဖြစ်သလို၊ နောက်ထပ်
လူ ၃၀၀၀ ခန့် ကတော့ အပြင်ဘက်မှာရောက်ရှိစောင့် ဆိုင်းနေခဲ့ ကြပါတယ်...
မယ်တော်မေရီ ကိုယ်တိုင်၊ ကိုယ်ထင်ပြကာ ကြွလာမယ်လို့ ကြိုတင်နမိတ်ဖတ်ဟောကြားခဲ့ 
တဲ့ဒပ်ဗလင် မြို့ သား Joe Coleman ကတော့ သူဟာ မယ်တော် ကို ကြိုတင်မျှော်လင့် ထား
တဲ့ အတိုင်း မြင်တွေ့ ခဲ့ ရပါတယ် လို့ပြောပြီး Basilica ကနေ ညနေ ၄ နာရီလောက်မှာပြန်
ကိုယ်တော်ကောင်းချီးပေးတော်မူခြင်းခံရသော မယ်တော်ရဲ့ ကိုယ်စားပုံရိပ် အဖြစ် သူ့ ကိုယ်သူ
ပြောဆိုနေသူ Coleman က သူဟာ မယ်တော်မေရီ နဲ့ လည်းဆက်သွယ်ပြောဆိုခဲ့ ရပါတယ်
ဒါပေမယ့် မယ်တော်ကသူ့ ကိုဘာတွေပြောခဲ့ တယ်၊ ဘာတွေမိန့် မှာခဲ့ တယ်ဆိုတာကိုတော့ 
ပြန်လည်ပြောကြားမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ ဆိုခဲ့ ပါတယ်...
မယ်တော်ကိုယ်ထင်ပြကြွရောက်မှာကို စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိသူတွေ သာမြင်နိုင်မှာဖြစ်
ပါတယ်လို့ လည်း Coleman က ယခုသီတင်းပတ်အစောပိုင်း ကတည်းက ပြောကြားထားခဲ့ 
ပါတယ်.... ( ဒီလိုဆိုတော့အဲဒီနေ့ ကမမြင်လိုက်ရတဲ့ သူအားလုံး၊ သူကလွဲယင် စိတ်ကောင်း
နှလုံးကောင်းမရှိသူတွေလို့ ဆိုရာရောက်သွားတာပေါ့ ဗျာ...)
ယခုလ၊ လဆန်းပိုင်းတုံးကလည်း လူပေါင်းငါးထောင်လောက်ဟာ Knock Shrine ဘုရားရှိခိုး
ကျောင်း ကိုလာရောက်ခဲ့ ကြပါသေးတယ်...ဘာဖြစ်လို့ လည်းဆိုတော့တစ်ချိူ့ က နေမင်း
ကြီးဟာ ကောင်းကင်မှာ ယိမ်းနွဲ့ လှုပ်ှရား၊ ကခုန်နေတာကို မြင်ခဲ့ ရတယ်လို့ ပြောကြားခဲ့ ကြ
လို့ ပါပဲ.... ( အထူးအဆန်းဆို သိပ်စိတ်မ၀င်စားကြပေဘူး....)
မယ်တော်မေရီက သူ့ ကို ခရစ်ယာန်ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးနဲ့ အတူ Basilica မှာရွတ်ဖတ်
သရ္ဇာယ် ဖို့ မှာကြားခဲ့ တယ်လို့Coleman က ဆိုပါတယ်...ဒါပေမယ့်ကက်သလစ်ဝတ်
ကျောင်းတော်က သူ့ ဆီကို ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ယောက်လွှတ်ပေးဖို့ ငြင်းဆိုခဲ့ လို့ သူ့ အနေ
နဲ့ စိတ်ပျက်ခဲ့ ရကြောင်းလည်း သူကပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
အင်း နောက်ဆုံးတော့ ...
သူ့ အပြစ်မဟုတ်...ဘုန်းကြီးလွှတ်ပေးဖို့ ငြင်းဆန်ခဲ့ တဲ့ ကျောင်းရဲ့ အပြစ်လို့ ပုံချ လိုက်တာ
More than 10,000 people were left disappointed in Ireland on Saturday as the Virgin Mary failed to appear as predicted at Knock Basilica.
By3p.m. Irish time about 7,000 people had crammed into the Basilica withafurther 3,000 people outside.
Dubliner Joe Coleman, the man who had predicted the apparition left the Basilica at about4p.m. saying he had seen Our Lady as anticipated.
Coleman, who says he is “a visionary of our Blessed Mother” said he had also received communication from the Virgin Mary. However, he said he was unwilling to reveal the message.
Speaking earlier this week Coleman had he warned that the visitation would only be visible “to people who come with an open heart”.
Posted by Unknown | at 2:42 AM |3comments
Labels: news: irishcentral.com
ကမ္ဘာ့ အသန်စွမ်းဆုံး မိန်းကလေး....
ရုရှားနိုင်ငံမှ ကောင်မလေး ဗာရာအကူလိုဗာဟာ ကိုယ်အလေးချိန် ၄၀ ကီလို ( ၈၈ ပေါင် ) သာ
ရှိပေမယ့်သူမအနေနဲ့အလေးချိန် ၃၅၀ ကီလို ( ပေါင် ၇၀၀ ) အလေး ကိုမနိုင်တဲ့ အတွက် ဟာ
ကျူလီ လူသန်မလေး လို့ အမည်ပေးကာ ကမ္ဘာ့ အသန်စွမ်းဆုံး ကလေးမဖြစ်ခဲ့ပါတယ်...
သူမရဲ့ အဆိုပါစွမ်းဆောင်ချက်တွေကို ကမ္ဘာ့ စံချိန်တင် ဂင်းနက်စ် မှတ်တမ်းမှာ နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်
ဖော်ပြအတည်ပြုခဲ ၊့ အသိအမှတ်ပြုခဲ့ ပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်....
သူမရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဖုထစ်ဖောင်းကြွတဲ့ ကြွက်သားအစိုင်အခဲတွေ ထင်သာမြင်သာအောင်မရှိ
ပေမယ့်သူမရဲ့ အံ့ သြစရာကောင်းလောက်တဲ့ ၊ ကြီးမားပြင်းထန်တဲ့ စိတ်စွမ်းအား၊ သေးသွယ်
ပါးလျတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်၊ သေးငယ်တဲ့ အကြောအချဉ် တွေနဲ့ မို့ သူမရဲ့ အစွမ်းကတော့ မယုံကြည်
သူမကတော့ ကျွန်မဟာ ဖေဖေ့ လိုပဲ အရပ်လည်းရှည်ပြီး၊ ကိုယ်အလေးချိန်လည်း ကီလို ၁၀၀
ကျော်တဲ့ထွားထွားကြိုင်းကြိုင်းလူသန်ကြီးသာ ဖြစ်ချင်တာပါ လို့ ဆိုခဲ့ ပါတယ်...
အခုလို အံ့ သြဖွယ်ကောင်းလောက်တဲ့ ကမ္ဘာ့ စံချိန်တင် အလေးမနိုင်အောင်တော့ သူမဟာ
မွေးကတည်းက သန်စွမ်းတာမဟုတ်ပါဘူး...သူမရဲ့ ဖခင်က နေ့ စဉ်လေ့ ကျင့် ပေးနေခဲ့ တာ
သူမရဲ့ နေ့ စဉ်အလေးမလေ့ ကျင့် ခန်းတွေနဲ့ မရပ်မနားရှိနေပေမယ့် လည်း သူမဟာကျောင်း
မှာလည်းစာတော်သူတွေထဲမှာ ထိပ်ဆုံးကပါပဲတဲ့ ....
အခုတော့ သူမဟာ ၇ တန်းမှာ စာသင်ကြားနေပါတယ်တဲ့ ....
Varya’s muscles are barely visible but she has tremendous will-power, translucent body and thread-like tendons.
Varya says, “I wish I could be big, really big: 190 cm tall and weigh more than 100 kg, like my dad.”
သူ့ အဖေကိုတောင် ကျောပိုးပေးစီးနိုင်တယ်...အသာလေးပဲ
သတ္တ၀ါနဲ့ လက်နက်နဲ့ မမျှ လိုက်တာဗျာ...
သြော်...မွေးကတည်းကသန်စွမ်းသူမဟုတ်...ဒီလိုပဲကြိုးစားလေ့ ကျင့် ယင်ရတယ်...
ကြီးယင်မှီ၊ ငယ်ယင်ချီတဲ့ .....
သူကတော့ အချီခံတာမဟုတ်၊ သူကချီ၇တာဗျာ....
အမယ်မင်း !!! ရက်စက်ပါပေ့ ကွယ် !!!
ဆိုက်ကားငှားစရာမလိုတော့ ဘူးပေါ့ ဗျာ....
မိသားစုအားလုံး သူ့ အပေါ်တက်စီးသွားရုံပဲ....
Practice makes perfect တဲ့ ....
ရောက်တော့ မယ် ....တောင့် ထား....
( အမှန်တော့ အဖေ့ ထက်တောင်သမီးဖြစ်သူက သာပါသေးတယ်...)
Posted by Unknown | at 12:33 AM |4comments
Labels: photos : news
Boy sleeps after arm-less fun
လက်ပြတ်သွားတာတောင်အိပ်ယာထဲတိတ်တိတ်လေးဝင်အိပ်နေခဲ့ တဲ့ ကလေး...
ဂျာမနီနိုင်ငံမှ မိခင်ဖြစ်သူတစ်ဦးဟာ သူမရဲ့ သားငယ်ကို ကျောင်းသွားဖို့ အိပ်ယာမှ နှိုးလိုက်
ရာမှာ သားဖြစ်သူရဲ့ လက်ဟာ လွန်ခဲ့ တဲ့ ညက ပြတ်ခဲ့ တာကို သိလိုက်ရလို့ ထိတ်လန့် တုန်
ကောင်လေးရဲ့ လက်ဟာကြောက်လန့် စရာကောင်းလောက်အောင်ကိုပဲ မတော်တဆဖြစ်ပြီး
ဒါပေမယ့် အံ့ သြလောက်အောင်ပဲ အသက်လေးနှစ်သာရှိသေးတဲ့ ကောင်လေးဟာ ကစား
ဖော်ဖြစ်သူ သူ့ အစ်ကိုရဲ့ အကူအညီနဲ့သူ့ လက်ပြတ်ငုတ်တိုလေးကို မျက်နှာသုတ်ပုဝါနဲ့ 
ပတ်ပြီး အိပ်ယာထဲ ၀င်အိပ်နေခဲ့ ပါတယ်...
မနက်မိုးလင်းလို့ သူ့ မိခင်ကကျောင်းသွားဖို့ နိုးလိုက်တော့ မှ ...” မထင်မှတ်ပဲ သားရဲ့ လက်
ပြတ်သွားတယ်မေမေ....သားတောင်းပန်ပါတယ်....” လို့ ဆိုခဲ့ ပါတယ်...
ရဲအစောင့် အကြပ်လိုက်ပါလာတဲ့ အရေးပေါ်သူနာတင်ယာဉ်ဟာ ကောင်လေးနဲ့သူ့ ရဲ့ ပြတ်
ထွက်သွားတဲ့ လက် ကိုပါတင်ဆောင်ပြီး ဆေးရုံကိုအမြန်မောင်းသွားခဲ့ ပါတယ်...
ဒါပေမယ့် အချိန်နှောင်းသွားခဲ့ ပြီမို့ ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီးတွေ အနေနဲ့ ပြတ်သွားတဲ့ လက်ကိုတော့ 
အခုတော့ ကောင်လေးဟာ ကံကောင်းထောက်မစွာပဲ ဆေးရုံမှာ ပြန်လည်ကျန်းမာလာပါပြီ....
” ဒီကလေးဟာ လက်တစ်ဖက်လုံးပြတ်သွားတာတောင် အဲဒီညကပဲ သွေးထွက်လွန်ပြီးသေ
မသွားခဲ့ တာကိုမှ အံ့ သြစရာလို့ မခေါ်ယင် တစ်ခြားဘာကိုများ ဒီထက်အံ့ သြစရာလို့ ပြော
ရဦးမှာလည်း....” လို့ ရဲ တပ်ဖွဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့် ရှိသူ Wolfgang Juergens ကပြောခဲ့ ပါတယ်...
အဲဒီအဖြစ်အပျက်ဟာ ဂျာမနီနိုင်ငံ တောင်ပိုင်း Ulm မြို့ မှာရှိတဲ့ သူတို့ ရဲ့ နေအိမ်မှာ အဆိုပါ
ကောင်လေးနဲ့အသက် ၁၁ နှစ်အရွယ်ရှိ သူ့ ရဲ့ အစ်ကိုတို့ မီးဖိုချောင်မှာထားရှိတဲ့ အ၀တ်လျှော်
စက်အဟောင်းကြီးနဲ့ ဆော့ ကစားရာကနေဖြစ်ခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်....
အ၀တ်လျှော်စက်ကြီးရဲ့ အပေါ်ယံအဖုံးတွေကိုဖြုတ်ထားတာမို့အထဲကအ၀တ်ထည့် လျှော်ရတဲ့ 
လည်ပတ်မောင်းနှင်ရတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေဟာ အကာအကွယ်မဲ့ နေခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်...
ကောင်လေးနှစ်ယောက်ဟာ အ၀တ်လျှော်စက် ခလုတ်ကိုဖွင့် ပြီးကစားတဲ့ အခါမှာတော့ အငယ်
ကောင်လေးရဲ့ လက်ဟာ လည်ပတ်နေတဲ့ အ၀တ်ထည့် ရတဲ့ သံစည်နဲ့ စက်ရဲ့ ကိုယ်ထည်တို့ 
ကြားမှာ ညှပ်ပြီးပြတ်ထွက်သွားခဲ့ တာပါ...
အစ်ကိုဖြစ်သူက ပြတ်ထွက်သွားတဲ့ ညီငယ်ရဲ့ လက်ကို ကောက်ယူပြီးမိသားစုသုံးရေခဲသေတ္တာ
ထဲမှာ ထည့် ထားခဲ့ ပါတယ်...သူတို့ ဟာ သူတို့ ရဲ့ မိခင်ကိုပြောပြဖို့ ကြောက်ရွံ့ ခဲ့ လို့ အံ့ သြ
ဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်ပင် အိပ်ယာထဲကိုတိတ်တိတ်လေး ၀င်အိပ်နေခဲ့ ကြပါတယ်...
အ၀တ်လျှော်စက်ရဲ့ လျှပ်စစ် စနစ်တွေချွတ်ယွင်းပျက်ပြား နေတာကြောင့် စက်ထဲကိုထည့် လျှော်
မည့်အ၀တ်တွေထည့် သည့် အဖုံးပွင့် နေလျှက်ပင်လျှင် စက်လည်ပတ်ခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်လို့ 
ရဲတပ်ဖွဲ့ ကပြောဆိုခဲ့ ပါတယ်...
လက်တစ်ဘက်လုံး ပြတ်သွားခဲ့ တာတောင် သွေးထွက်မလွန်၊ အပြင်းအထန်နာကျင်မှုမခံစား
ရပဲ အိပ်ယာထဲဝင်အိပ်နေနိုင်ခဲ့ တဲ့ ကလေးကတော့ တစ်ကယ့် အံ့ ဖွယ်သုတပါပဲဗျာ....
A shocked mother mum woke her son up for school - and discovered his arm had been severed in the night. The lad's limb was ripped off inahorrific accident on Wednesday night. But amazingly the four-year-old boy - helped by his older brother - went to bed with his stump wrapped inatowel.
When his mother woke him up in the morning he said: "Sorry mami, I've gone and lost my arm. I didn't mean to." An ambulance withapolice escort raced the boy toalocal hospital with the severed limb. But it was too late for surgeons to reattach it. The boy is now recovering in hospital but is lucky to be alive. Police spokesman Wolfgang Juergens said: "It is nothing short ofamiracle that he didn't bleed to death in the night."
The accident happened when the boy and his 11-year-old brother played with an old washing machine in the kitchen at their home in the city of Ulm, southern Germany. The appliance had been stripped down so the drum was exposed. The pair switched it on and the boy's arm was caught between the revolving drum and the frame — before being ripped off.
But the older brother picked up the severed limb and put it in the family freezer. Afraid to tell their mum what had happened, the boy astonishingly went to bed. Police say an electrical defect meant thatasensor which should have not allowed the drum to spin while the front-loader's door was open was not working.
Posted by Unknown | at 11:54 PM |0comments
ရည်းစားနဲ့ လွန်ကျူးမိလို့ ကျောက်တုံးဖြင့် ထုသတ်ပြီးအပြစ်ပေးခံရသူ....
ဆိုမာလီနိုင်ငံမှ အသက် ၂၀ အရွယ်ရှိအမျိူးသမီးတစ်ဦးကို သူမရဲ့ ရည်းစားအမျိူးသားတစ်
ယောက်နဲ့ဖောက်ပြန်ကျူးလွန်မိခဲ့ ပါတယ်လို့ ဝန်ခံခဲ့ အပြီးမှာ စစ်သွေးကြွသူပုန်များက
ကျောက်တုံးဖြင့်ထုသတ်၍ သေဒါဏ်အပြစ်ပေးစီရင်လိုက်ကြပါတယ်...
အမျိူးသမီးဟာ အိမ်ထောင်မရှိသူတစ်ခုလပ် တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်.... သူမမှာလက်ထပ်ထားသူ
မရှိသော်လည်း အခုလိုမျိူးယောကျာင်္းတစ်ယောက်နဲ့ ချစ်ကြိုက်နေတာဟာ ဆိုမာလီနိုင်ငံရဲ့ 
အစွန်းရောက် အစ္စလာမ်ဝါဒီများ အမြင်မှာတော့ အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်မှုဆိုတဲ့ အစ္စလာမ်
ဘာသာရေး ဆိုင်ရာဥပဒေ Sharia Law ကိုချိူးဖောက်ရာရောက်တယ်လို့ မြင်ကြပါတယ်...
ယခုလို ပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့ သူမအတွက်အပြစ်ဒါဏ် ကတော့ လူ ၂၀၀ လောက်ရဲ့ ရှေ့ မှာသူမ
ကို ခါးလယ်အထိရောက်အောင် မြေမြုပ်ပြီး ကျောက်တုံးဖြင့် ပစ်ပေါက်ထုသတ်ခဲ့ တာဖြစ်ပါ
ပုံထဲမှာတော့ ထိုကဲ့ သို့ အပြစ်ပေးနေပုံကိုသရုပ်ဆောင်ပြထားတာကိုတွေ့ ရမှာပါ....
ဆိုမာလီနိုင်ငံမှာတော့ ကျောက်တုံးဖြင့်ထုသတ်ခံရတဲ့ အမျိူးသမီးကို အဲဒီအတိုင်းပဲဆက်
သူမနဲ့ ချစ်ကြိုက်ခဲ့ တဲ့ အိမ်ထောင်မရှိသူအမျိူးသားဟာလည်း အဆိုပါပြစ်မှုအတွက် ကြိမ်
ဒါဏ်အချက် ၁၀၀ ကျခံရမှာ ဖြစ်ပါတယ်...
အစ္စလာမ်စစ်သွေးကြွအုပ် Al Shabab အဖွဲ့ ရဲ့ တရားသူကြီး Sheikh Ibrahim Abdirahman
ကတော့ အဆိုပါ အမျိူးသမီးကို Wajid မြို့ မှာ လူ ၂၀၀ လောက်ရှိတဲ့လူအုပ်ရှေ့ မှာတင်သတ်
ဖြတ်စီရင် လိုက်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်...
အသက် ၂၀ အရွယ်ရှိ အမျိူးသမီးလေးဟာ အသက် ၂၉ နှစ်အရွယ်ရှိ အိမ်ထောင်မရှိသူ အမျိူး
သားတစ်ဦးနဲ့ ချစ်ကြိုက်ခဲ့ ပြီး လွန်လွန်ကျူးကျူး ဖြစ်ခဲ့ ပြီး ကိုယ်ဝန်ရှိခဲ့ ပါတယ်...ကလေးမွေး
ပေမယ့် မွေးလာတဲ့ ကလေးကအသက်မရှိခဲ့ ရှာပါဘူး...လို့တရားသူကြီး Abdirahman က
ဆိုမာလီနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသ အများစုကိုထိန်းချူပ်ထားတဲ့ ၊ အာဖဂန်နစ္စတန်အခြေစိုက် ကမ္ဘာ
ကျော် အယ်ကေဒါ အကြမ်းဖက်အုပ်စု အဖွဲ့ နဲ့ ဆက်သွယ်မှုရှိတဲ့အဆိုပါ Al Shabab စစ်သူ
ပုန်အဖွဲ့ ဟာ အစွန်းရောက် အစ္စလာမ်ဘာသာရေး ဥပဒေ Sharia Law ကိုသူတို့ ထိန်းချူပ်ထား
တဲ့ ဒေသမှာ ပြဌာန်း၊လိုက်နာစေခဲ့ ပါတယ်...
အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်မှုကြောင့် ကျောက်တုံးနဲ့ ပစ်ပေါက်ထုသတ်ပြီး အပြစ်ပေးတာဟာ လွန်
ခဲ့တဲ့ နှစ်ကနေ ယခုအထိ အနည်းဆုံးလေးကြိမ်ရှိခဲ့ ပြီဖြစ်ပါတယ်...
အမျိူးသမီးတွေကိုအခုလိုစီရင်တာကတော့ဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်...
A woman is pictured being prepared for stoning (file photo posed by actors). The woman stoned to death in Somalia would have been buried in the same way
Posted by Unknown | at 9:16 AM |3comments
Killer jailed by prayer for forgiveness
သူ့ အိမ်ပေါ်လည်းတက်နေသေးတယ်...သတ်ပြီးတော့ မှ
ခွင့် လွှတ်ပါတဲ့ ....
အတူနေရည်းစားဖြစ်သူရဲ့ မိခင်ဖြစ်သူကို သတ်ခဲ့ သူတစ်ဦးဟာ သူကျူးလွန်ခဲ့ တဲ့ အပြစ်တွေ
အတွက်ခွင့် လွှတ်ပါမည့် အကြောင်း ထာဝရဘုရားသခင်ထံ ၀န်ခံဆုတောင်း နေခဲ့ တာကို ရဲ
များကကြားသွားခဲ့ ပြီးနောက် အဖမ်းခံခဲ့ ရကာ ထောင်ဒါဏ်တစ်သက်တစ်ကျွန်း အပြစ်ပေးခြင်း
အသက် ၄၅ နှစ်ရှိ George Maben ဟာ သူ့ ရည်းစားရဲ့ မိခင်ဖြစ်သူ Maureen Cosgrove
အသက် ၆၅ နှစ် ကို သူမရဲ့ နေအိမ်မှာ လွန်ခဲ့ တဲ့ မတ်လက လည်ပင်းညှစ်ပြီးသတ်ခဲ့ တာဖြစ်
သူဟာ လန်ဒန်မြို့ တောင်ပိုင်း Carshalton Beeches အရပ်မှာရှိတဲ့အိမ်မှာ သေဆုံးသူ အမျိူး
သမီးကြီးရဲ့ သမီးဖြစ်သူ၊ သူနဲ့ ရတဲ့ ကိုယ်ဝန်လွယ်ထားရတဲ့သူ့ ရည်းစား Lucy Rees နဲ့ အတူ
ရဲများက သံသယရှိနေခဲ့ တဲ့ သူ့ ရဲ့ ကားထဲမှာ အသံဖမ်းကိရိယာများတပ်ဆင်ထားခဲ့ ပြီးနောက်
” အဖ ဘုရားသခင်....ကျွန်တော်မျိူးပြစ်မှားကျူးလွန်ခဲ့ တာတွေအတွက်အပြစ်သားကိုခွင့် လွှတ်
တော်မူပါ...” ဟု သူဆုတောင်းနေခဲ့ တာကိုကြားခဲ့ ရပြီးနောက် သူ့ ကိုဖမ်းဆီးခဲ့ ခြင်းဖြစ်ပါ
သူဟာထောင်ထဲမှာအနည်းဆုံး ၁၃ နှစ်လောက်တော့ အပြစ်ဒါဏ်ကျခံရမှာပါ....
တရားခွင်စစ်ဆေးမှုများအတွင်းမှာ Maben ဟာ သူ့ မိခင်အိမ်ကနေ အဘွားကြီး Cosgrove
ရဲ့ နေအိမ်ကို ဘတ်စကားစီးသွားခဲ့ တာ၊ လမ်းခရီးမှာ လက်အိတ်စွပ်နေခဲ့ တာတွေကို လုံခြုံရေး
ကင်မရာတွေကနေရုပ်သံဖမ်းထားခဲ့တာကနေ ရဲတွေကစုံစမ်းသိရှိခဲ့ကြောင်း၊ အဲဒီနောက်သူ
ဟာ အသက် ၃၄ နှစ်ရှိ သူ့ ရည်းစား Rees နဲ့ တွေ့ ပြီးအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ ကာ အဘွားကြီးသေ
ဆုံးနေတာတွေ့ ခဲ့ တယ်လို့ ကြားနာခဲ့ ၊ ထွက်ဆိုခဲ့ ပါတယ်...
သေဆုံးသူရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်မှအသားစအမျှင်စတွေကို Maben ရဲ့ အ၀တ်အစားမှာတွေ့ ရပေမယ့် 
သူ့ ကိုတရားစွဲဆိုဖို့သက်သေခံအချက်အလက်အထောက်အထားများ ပိုမိုလိုအပ်နေခဲ့ တယ်
ရဲတွေဟာ အလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်နေတဲ့Maben အသုံးပြုနေတဲ့ဖို့ ဒ် ကားမှာ လျှိူ့ ဝှက်အသံ
ဖမ်းစက်ကိုတပ်ဆင်ထားခဲ့ ပြီး၊ ဧပြီလ ၉ ရက်နေ့ မှာတော့ ” အို...ထာဝရအဖဘုရားသခင်...
ကျွန်တော်မျိူးကိုကူညီစောင်မတော်မူပါ...ကျွန်တော်မျိူးနှင့် လူစီ တို့ ကိုရဲတွေစုံစမ်းထောက်
လှမ်းနေတာတွေကို တားဆီးဖယ်ရှားပေးပြီး အားလုံးကိုအဆင်ပြေချောမွေ့ အောင်ဆောင်ကြဉ်း
ပေးတော်မူပါ...” ဟူသော တုန်ရီလှိုက်လှဲသော သူ့ ရဲ့ ဆုတောင်းသံ ကိုကြားခဲ့ ရပါတယ်...
” ကျွန်တော်မျိူးကျူးလွန်ခဲ့ တဲ့ အပြစ်တွေကိုခွင့် လွှတ်တော်မူပါ အဖဘုရားသခင်.... ကျွန်
တော်မျိူးအနေနဲ့ ဆက်ပြီးသည်းခံနိုင်စွမ်းမရှိတော့ လို့ ပါ ( သူ့ ကိုသတ်ခဲ့ ရတာပါ...) သူမ
ဟာ နေ့ စဉ်နဲ့ အမျှ ကျွန်တော့် ကိုဒုက္ခပေးနေခဲ့ တာပါ...ခွင့် လွှတ်ပါရန်အနူးအညွတ်တောင်း
ပန်အပ်ပါတယ်....” လို့ သူကဆုတောင်းခဲ့ ပါတယ်...
Maben ကတော့ လူသတ်မှုကို သူမကျူးလွန်ခဲ့ ပါဘူးလို့ ငြင်းဆိုခဲ့ ပါတယ်...သို့ သော် တရား
သူကြီးအဖွဲ့ ကတော့ သူ့ ကိုအပြစ်ရှိတယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ ပါတယ်...
တရားသူကြီး Jeremy Roberts က သူ့ ကိုအနည်းဆုံး ၁၃ နှစ် ထောင်ထဲမှာနေရမယ့် တစ်
တရားသူကြီးက Maben အနေနဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေဖြစ်နေတဲ့ အပြင် သေဆုံးသူရဲ့ စရိုက်လက္ခ
ဏာတွေကြောင့် ဖြစ်ခဲ့ ရတာမို့ ကြိုတင်ကြံစည်ကာ သတ်ဖြတ်မှုအဖြစ်ကနေ လျော့ ပေါ့ ပြီး
အပြစ်ဒါဏ်ကိုလျော့ ချပေးခဲ့တာလို့ ဆိုပါတယ်...
ဘုရားသခင်ခွင့် လွှတ်တာခွင့် မလွှတ်တာကတော့ နောက်မှ....
လောလောဆယ် ရဲတွေကတော့ခွင့် မလွှတ်နိုင်ဘူးတဲ့ ဗျာ....
A man convicted of murdering his girlfriend's mother after police overheard his prayers for forgiveness was jailed for life yesterday.
George Maben, 45, strangled Maureen Cosgrove, 65, in her home on 24 March this year. He had been living with Cosgrove's daughter Lucy Rees, who was pregnant with his child, at the house in Carshalton Beeches, south London. Police arrested Maben after bugging his car and overhearing his words: "God, forgive me for what I have done." He will serve at least 13 years in prison.
Maben denied murder but was convicted byajury at the Old Bailey. Judge Jeremy Roberts sentenced him to life imprisonment withaminimum term of 13 years. He said he was reducing the term from that which may have been expected fromapremeditated murder because it was out of character and because Maben had been under pressure.
Posted by Unknown | at 12:07 PM |3comments
'Give me 500 beautiful Italian girls': Colonel Gaddafi hires escort agency women during Rome summit and then tries to convert them to Islam
လက်ဆောင်တွေပွေ့ ပိုက်ပြီး ကားပေါ်ကိုအတက်.....
ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံရေးလောကမှာ ထူးထူးဆန်းဆန်းနေထိုင်ပြောဆို ကျင့် ကြံမှုတွေကြောင့် နာမည်
ကျော်ကြားလှတဲ့ လစ်ဗျားခေါင်းဆောင် အာဏာရှင် ဗိုလ်မှူးကြီး ကဒါဖီဟာ အီတလီနိုင်ငံကို
ရောက်ရှိနေခဲ့ စဉ် အခကြေးငွေပေးပြီးပျော်ပါးရတဲ့ အမျိူးသမီးများ စီစဉ်ပေးတဲ့ အေဂျင်စီတစ်
ခုကို ငယ်ရွယ်လှပသော အီတလီသူ အမျိူးသမီးအယောက် ၅၀၀ လောက် သူစီစဉ်တဲ့ ညနေ
ပိုင်း ဧည့် ခံပွဲတစ်ခုကို စေလွှတ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုမှာကြားခဲ့ ပြီး အဆိုပါအကျင့် စာရိတ္တပျက်
ပြားနေတဲ့ ( ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ ရင်းပြီးစီးပွားရှာနေတဲ့) မိန်းကလေးတွေ ကို အစ္စလာမ်ဘာသာထဲ
ကူးပြောင်းစေဖို့ ကြိုးစားခဲ့ ၊ စည်းရုံးခဲ့ တယ်လို့ သိရပါတယ်...
အသက် ၆၇ နှစ်ရှိခေါင်းဆောင်ကြီးဟာ သူမှာကြားခဲ့ တဲ့ မိန်းကလေးတွေဟာ အသက် ၁၈ နှစ်
ကနေ ၃၅ နှစ်အတွင်း ရှိရမယ်၊ စကတ်တိုနံ့ နံ့ လေးတွေမ၀တ်ဆင်ရဘူး၊ အင်္ကျီဆိုယင်လည်း
လည်ပင်းသိပ်မဟိုက် စေရပါဘူးတဲ့ ...ဒါပေမယ်. ဒေါက်မြင့် ဖိနပ်တွေတော့ ဝတ်ဆင်နိုင်ပါတယ်
လို့် သူ့ ရဲ့ စည်းကမ်းချက်တွေကို ပြောခဲ့ ပါတယ်...
အီတလီနိုင်ငံမှာကျင်းပနေတဲ့ ကမ္ဘာ့ စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံမှုဆိုင်ရာထိပ်သီးညီလာခံကိုတက်ရောက်
တဲ့ကဒါဖီဟာ သားနားသပ်ယပ်စွာဝတ်စားထားတဲ့ အဆိုပါအမျိူးသမီးများကို ရောမမြို့ လယ်
က တည်းခိုခန်းတစ်ခုမှာ စုရုံးစေခဲ့ ပြီး အဲဒီကမှတဆင့် အီတလီနိုင်ငံဆိုင်ရာ လစ်ဗျားသံအမတ်
ကြီးရဲ့ နေအိမ်ဆီကို ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်...
ရွှေဝါရောင်ဆံပင်၊ ပိတုံးရောင်ဆံပင်တွေနဲ့ ဒေါက်မြင့် ဖိနပ်တွေစီး၊ ပေါင်အထိရောက်တဲ့ ခြေ
အိတ်အရှည်ကြီးတွေဝတ်ကာ၊ ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ လေးပုံသုံးပုံအထိရှည်တဲ့ ကုတ်အင်္ကျီတွေဝတ်ဆင်
ထားတဲ့ မိန်းကလေးတွေဟာ လုံခြုံရေးတွေရဲ့ စစ်ဆေးမှုကိုခံယူဖို့ တန်းစီနေခဲ့ ကြတာကိုတွေ့ 
လာရောက်တဲ့ အထဲကတစ်ချိူ့ မိန်းကလေးများကိုတော့ သူတို့ ဝတ်စားထားတာ မသင့် တော်၊
သို့ မဟုတ် သူတို့ ဟာ အရပ်ပုလွန်းတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ ပြန်လွှတ်လိုက်ပါတယ်....
( ခေါင်းဆောင်ကြီးက ဆံပင်ရှည်အရပ်မြင့် မြင့် ကိုမှ သဘောကျပုံရတယ်နော်....)
သူတို့ အားလုံး သံအမတ်ကြီးအိမ်မှာလူစုံပြီဆိုမှ ကဒါဖီဟာ တစ်နာရီလောက်နောက်ကျပြီး မှ
ခန့် ငြားထည်ဝါလှတဲ့ ကားဖြူကြီးနဲ့ ရောက်ရှိလာပြီး မိန်းကလေးများကို အစ္စလာမ်ဘာသာရဲ့ 
ကြီးကျယ်မြင့် မြတ်ပုံများကို ဟောပြောခဲ့ ပါတယ်တဲ့ ....
သူဟာ မိန်းကလေးတွေအားလုံးကို အစ္စလာမ်ဘာသာရဲ့ အထွတ်အမြတ် ကိုရမ်ကျမ်းမြတ်
အကြောင်းလည်းဟောပြောပြီး သူတို့ ကို ကိုရမ်ကျမ်းစာအုပ်တစ်အုပ်နဲ့သူ ၁၉၇၅ ခုနှစ်က
ရေးခဲ့ တဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ နိုင်ငံရေးသဘောတရားများဆိုတဲ့ အစိမ်းရောင်စာအုပ်တစ်အုပ်စီ
ကို လက်ဆောင်ပေးခဲ့ ပါတယ် .....( မော်စီတုံးကတော့ စာအုပ်နီပေါ့ ဗျာ....သူကတော့ 
စာအုပ်စိမ်း ပေါ့ ....ထွင်တာ...ထွင်တာ ....ဒါပေမယ့် သူကတော့ စည်းရုံးရေးဆင်းတာပြည့် 
အသီးသီးရတဲ့ လက်ဆောင်တွေနဲ့ အတူ.....
အခုလို မိန်းကလေးတွေချည်းပဲပါဝင်တဲ့ အခမ်းအနားဟာ စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံရေးအစည်းအဝေး
လာတက်တဲ့ တစ်ခြားနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ ဇနီးများဟာလည်း အီဂျစ်သမ္မတ ဟူစနီမူဘာရက်
ရဲ့ ဇနီး စူဆန်မူဘာရက် ခေါင်းဆောင်ကျင်းပတဲ့ အစားအစာချိူ့ တဲ့ ဆင်းရဲမွဲတေမှုဆိုင်ရာညီလာ
ခံနှီးနှောဖလှယ်ပွဲ ကျင်းပနေချိန်မှာပြုလုပ်ခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်....
အဆိုပါ စားနပ်ရိက္ခာညီလာခံကို ကမ္ဘာ့ ခေါင်းဆောင်တွေတော်တော်များများ တက်ရောက်ခဲ့ ကြ
ဒါပေမယ့် ဗြိတိန်၊ အမေရိကန်၊ ရုရှားနဲ့ တစ်ခြားစီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံများကတော့ ကမ္ဘာ့ 
အစားအစာနဲ့ လယ်ယာစိုက်ပျိူးရေးအဖွဲ့ ကြီးက ကြီးမှူးပြီးသုံးရက်ကြာကျင်းပခဲ့ တဲ့ အဆိုပါညီ
လာခံကို မတက်ရောက်ခဲ့ ကြပါဘူး.... ( အခုလိုမျိူး ကဒါဖီ ပါယင် ကြောင်တောင်တောင်တွေ
အီတာလျှံဘာသာနဲ့ ရေးထားတဲ့ ကိုရမ်ကျမ်းနဲ့ ကဒါဖီရဲ့ 
သဘောတရားရေးရာအဆိုအမိန့် များ စာအုပ်စိမ်း....
Bizarre: One of the models displays the Koran and Green Book given to her by Colonel Gaddafi
ကဒါဖီဟာ နိုင်ငံရပ်ခြားကို ခရီးထွက်ခွာတိုင်း ခပ်ကြောင်ကြောင်၊ ခပ်ဆန်းဆန်း တွေတောင်း
ဆိုတတ်ပါတယ်...အများအားဖြင့် တော့ သူနေထိုင်တည်းခိုဖို့ရှေးတုံးကအာရပ်ခရီးသွားတွေ
အသုံးပြုနေထိုင်ကြတဲ့ ရွက်ဖျင်တဲကြီးကို ရောက်ရာနိုင်ငံရဲ့ ပန်းခြံတွေမှာ ထိုးပေးနိုင်ဖို့ တောင်း
ယခုနှစ်အစောပိုင်းက အီတလီနိုင်ငံ၊ ရောမမြို့ ကိုိလာရောက်လည်ပတ်ခဲ့ စဉ်တုံးကလည်း အမျိူး
သမီးစီးပွားရေးစွမ်းဆောင်ရှင်များကို တွေ့ ဆုံပြီးမိန့် ခွန်းပြောဖို့ တောင်းဆိုခဲ့ ပါသေးတယ်....
( အမျိူးသားငနဲများကတော့ သူရွှီးသမျှ ယုံမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ သူသိပုံရတယ်.... )
ကောင်မလေးတွေဆိုရှေ့ ကိုတိုး.....ဆိုတဲ့ ခေါင်းဆောင်ကြီး....
မည်သို့ ပင်ဆိုစေ၊ အခုတစ်ခေါက်သူစီစဉ်တဲ့ တွေ့ ဆုံဟောပြောပွဲကိုတော့ တက်ရောက်ခဲ့ ကြတဲ့ 
မိန်းကလေးတွေ တော်တော်များများက သဘောမကျကြပါဘူး... ဒါတောင် လာတဲ့ မိန်းကလေး
တိုင်းကို အပိုဆုကြေးငွေ ပေါင်စတာလင် ၅၀ ( ဒေါ်လာ ၈၃ ) ပေးခဲ့ သေးတာပါ....
ပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့ တဲ့ မိန်းကလေးအများစုက သူတို့ အနေနဲ့ သူတို့ ကိုးကွယ်ယုံကြည်တဲ့ ဘာ
သာကိုရော၊ သူတို့ ကိုပါ စော်ကားတယ်လို့ ခံစားခဲ့ ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်....
အမည်မဖော်လိုသူ ရွှေဝါရောင်ဆံပင်နဲ့ အမျိူးသမီးတစ်ဦးကတော့ ” သူဟာ ကျွန်မတို့ ယုံကြည်
တဲ့ ခရစ်တော် ဟာအားလုံးအတွက် အနစ်နာခံပြီး လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာအသက်စွန့် ပြီးတော့ လူ
သားတွေရဲ့ အပြစ်ကိုသူ့ သွေးနဲ့ ဆေးကြောသန့် စင်ပေးသွားတယ်ဆိုတာကိုမယုံကြည် ပါဘူးတဲ့ ....
ခရစ်တော်ဆိုတာ သူ နဲ့ ရုပ်ချင်းဆင်တူသူတာဖြစ်ပါတယ်...သူ့ ကိုလည်းထာဝရဘုရားသခင်က
စောင့် ရှောက်ကယ်တင်ခဲ့ တာပါ....” လို့ ဆိုခဲ့ တယ်လို့် ပြောခဲ့ ပါတယ်....
တစ်ခြားမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကတော့ ...” ကျွန်မထင်တာက ကျွန်မတို့ ဟာ ပါတီပွဲတစ်ခုကို
သွားကြရမယ်ထင်နေတာ....အခုတော့ ရေတစ်ခွက်တောင်မတိုက်၊ မုန့် လေးတစ်ချပ်တောင်မ
ကျွေးပါဘူး....” လို့ ပြောပြခဲ့ ပါတယ်...
ဒါပေမယ့် ရောမမြို့ အခြေစိုက် မိန်းကလေးပေါင်း ၆၅၀၀၀ အရံသင့် စာရင်းရှိတဲ့ ဥရောပရဲ့ အကြီး
ဆုံးအခကြေးငွေပေးပြီးပျော်ပါးရတဲ့ အမျိူးသမီးများရှာဖွေစီစဉ်ပေးတဲ့Hostessweb ကုမ္ပဏီ က
Alessandero ကတော့ ....” အဲဒီပွဲဟာ တစ်ကယ့် ကိုပျော်စရာကောင်းတဲ့ ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်ခဲ့ ပါတယ်...
ကောင်မလေးတွေဟာ အဲဒီညနေချမ်းရဲ့ ပျော်ရွှင်ကြည်နူးမှုကိုတော်တော်နဲ့ မေ့ နိုင်မှာတောင်မ
ဟုတ်ပါဘူး....” လို့ ပြောခဲ့ ပါတယ်...
ကောင်မလေးတွေကို ဒီကားကြီးမျိူးနဲ့ ကို သံအမတ်ကြီးနေအိမ်ကိုပို့ ပေးခဲ့ တာတဲ့ ....
” သူတို့ အထဲကတစ်ချိူ့ ဟာ လစ်ဗျားကို ကိုယ်တိုင်သွားပြီးနေရာ၊ရှုခင်းတွေကြည့် ချင်ပြီး ကဒါဖီ နဲ့ 
ပါ ကိုယ်တိုင်စကားပြောပြီး အစ္စလာမ်ဘာသာကို ကူးပြောင်းဖို့ စိတ်ကူးရှိကာ ကျွန်တော့် ကိုဆက်
” သူက ( ကဒါဖီ ) ကောင်မလေးတွေကို အီတလီဘာသာနဲ့ ရေးသားပြန်ဆိုထားတဲ့ ကိုရမ်ကျမ်းစာ
နဲ့ သူ့ ရဲ့ နိုင်ငံရေးအာဘော် စာအုပ်တွေပေးပြီး သူအနေနဲ့ ကောင်မလေးတွေ အဲဒီစာအုပ်တွေကို
ဖတ်ဖြစ်တာသေချာသလားဆိုတာသူတို့ ကို ဆက်သွယ်စုံစမ်းနေမယ်လို့ ပြောခဲ့ ပါတယ်....”
” ကျွန်တော်အလေးအနက်ထားပြီးပြောချင်တာတစ်ချက်ကတော့ဘယ်ကောင်မလေးတစ်
ယောက်မှ အဲဒီမှာ ( သံအမတ်ကြီးအိမ်တော်မှာ ) ညမအိပ်ခဲ့ ပါဘူး....သူတို့ အ၀င်အထွက်
လူဦးရေစာရင်းကို ကျွန်တော်သေသေချာချာရေတွက်ထားခဲ့ ပါတယ်...
တွေ့ ဆုံးဆွေးနွေးပြောဆိုတာကလွဲလို့တစ်ခြားဘာမှ မသင့် တော်၊ မလျော်ကန်တာတစ်ခုမှ
မဖြစ်ခဲ့ ပါဘူး....” လို့ ပြည့် တန်ဆာအကျိူးဆောင်လုပ်ငန်းမှ ပုဂ္ဂိုလ် ကပြောကြားခဲ့ ပါတယ်....
သူကဆက်ပြီး အခုလိုမျိူး ( မိန်းကလေးတွေကို အစ္စလာမ်ဘာသာကို ဆွဲဆောင်သိမ်းသွင်းဟော
ပြောမယ့် ) ပွဲကို ယနေ့ ညနဲ့ မနက်ဖြန်ညတွေမှာလည်း ဆက်လက်ပြုလုပ်သွားဖို့စီစဉ်ထားခဲ့ 
ပြီးပါပြီ လို့ ဆိုပါတယ်....
” ဘာနေရာမှာ၊ ဘယ်လိုပြုလုပ်မယ်ဆိုတာတော့ မသိဘူးပေါ့ လေ....ကျွန်တော်သိတာကတော့ 
ကောင်မလေးတွေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ဟာ ကုမ္ပဏီ ရုံးအပြင်ကနေစောင့် နေကြမယ်...ကားတွေနဲ့ 
ကောင်မလေးတွေကိုိလာကြိုပြီးခေါ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုတာပါပဲ... ” လို့ သူက ထပ်ပြောပြပါတယ်...
ယနေ့ ကျင်းပတဲ့ ထိပ်သီးညီလာခံမတိုင်မီမှာပဲ အခုလိုငွေပေးပျော်ပါးရတဲ့ အမျိူးသမီးတွေကို
သူ့ ရဲ့ အိမ်တော်ကိုခေါ်သွင်းမိလို့ ကျော်မကောင်းကြားမကောင်းဖြစ်နေတဲ့ အီတလီဝန်ကြီးချူပ်
ဆီဗီယို ဘာလူစကိုနီဟာ သူ့ မိတ်ဆွေ ကဒါဖီင်္ကို ပွေ့ ဖက်ပြီးကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ ပါသေးတယ်...
(သူတော်ချင်းချင်း၊ သတင်းမွေ့ မွေ့ ပေါ့ ဗျာ...)
ကဒါဖီကလည်း ဘာလူစကိုနီ ကို သူ့ ရဲ့ အရင်းနှီးဆုံးမိတ်ဆွေ အဖြစ်ပြောဆိုခဲ့ ပါတယ်...
မာရသွန်မိန့် ခွန်းရှည်ကြီးတွေ ( လေးငါးခြောက်နာရီကြာ) ပြောတတ်တဲ့ သူ့ မိတ်ဆွေ
လစ်ဗျားခေါ့င်းဆောင်ကဒါဖီကိုတော့ အီတလီဝန်ကြီးချူပ် က ဒီတစ်ခါတော့ မိန့် ခွန်းကို
ခပ်တိုတို ငါးမိနစ်လောက်ပဲပြောပါ....ကျွန်တော်တို့ ဟာ မျှော်လင့် ချက်နဲ့ အသက်ရှင်နေတာ
ဖြစ်ပေမယ့် အကြာကြီးတော့ နားမထောင်ပါရစေနဲ့ လို့ တောင်းပန်ခဲ့ ပါတယ်တဲ့ ....
အံ့ အားသင့် စရာပဲ၊ လျှာရှည်တဲ့ ကဒါဖီတစ်ယောက် မိန့် ခွန်းကို ဆယ်မိနစ်ပဲကြာအောင်ပြော
သူက ယခင်ထိပ်သီးညီလာခံတွေက ကတိတွေအားလုံးဟာ သဲထဲရေသွန်သလို ဘယ်ဟာမှအ
ကောင်အထည်မပေါ်ခဲ့ ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ ပြီး အီတလီနိုင်ငံကိုတော့ စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံရေးအတွက်
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကြိုးပမ်းမှုမှာ အရေးကြီးတဲ့ ၊ သိသာထင်ရှားတဲ့ အခန်းကဏ္ဍ ကနေပါဝင်ခဲ့ တယ်
အီတလီနိုင်ငံဆိုင် လစ်ဗျားသံအမတ်ကြီး Haffed Gadur ကတော့ ” ကျွန်တော်တို့ ဗိုလ်မှူးကြီးက
အစ္စလာမ်ဘာသာဟာ အမျိူးသမီးတွေကို ဖိနှိပ်ချူပ်ချယ်တာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာ ကောင်မလေး
တွေကိုပြောပြချင်လို့တွေ့ ဆုံတာသက်သက်ပါပဲ....” လို့ ပြောကြားခဲ့ ပါတယ်....
ဒါနဲ့ တစ်ဆက်တည်းပဲ ယူကျူ မှာတွေ့ မိတဲ့ ပညာရှင်များရဲ့ သုတေသနပြုလုပ်ချက်ဗီဒီယိုကလစ်
အသေအချာကြည့် ယင်တော့ ရင်လေးစရာပေပဲ....
လူသားတိုင်းဟာ သူ့ ဘာသာသူယုံကြည်လို့ ကိုးကွယ်တာကတော့ ပြဿနာမရှိပါ....
စစ်ဆင်ရေးတစ်ရပ်လို ရည်မှန်းချက်တစ်ရပ်အနေဖြင့် ဆိုယင်တော့ မကောင်းတာကို
အမျိူးဘာသာ၊ သာသနာအတွက်အတွေးတစ်စရမည် ဆိုလျှင် ဘာသာပြန်တင်ပြရကျိူးနပ်ပါပြီ....
Libyan dictator Colonel Gaddafi asked an escort agency to supply 500 ‘beautiful Italian girls’ foragala evening at which he tried to convert them to Islam, it emerged today.
The 67-year-old leader also requested that they ‘were aged between 18 and 35 years old, did not wear mini skirts or have plunging necklines but high heels were OK.’
The women, all glamorously dressed, were told to meet atahotel in the centre of Rome, where Gaddafi is attendingasummit on world food security, before being taken to the Libyan ambassador’s residence in the city.
The girls,amixture of blondes and brunettes dressed in heels, stockings and three-quarter length coats, were seen queuing up to go through security checks.
Several of them were turned away after being told they were inappropriately dressed or they were too short.
Once inside - and after an hour’s delay - Gaddafi arrived inawhite limousine to lecture the girls on the superiority of Islam.
He also gaveatalk on the Muslim Koran and gave all the girlsacopy asagift as well asasigned version of his Green Book on democracy and political philosophy, written in 1975.
The all-female event took place at the same time as other leaders’ wives were attendingaforum to discuss food poverty, led by Suzanne Mubarak, wife of Egyptian President Hosni Mubarak.
The event in Rome has attracted several world leaders.
But Britain, the United States, Russia and other economic powerhouses are absent from the three-day summit being held by the Food and Agriculture Organisation.
Gaddafi hasahabit of making bizarre requests when travelling abroad - usually it is foraBedouin tent to be pitched in the grounds ofapark.
And on an earlier visit to Rome this year he asked to speak to an audience of businesswomen.
However, this time, his lecture did not go down well with many of the girls, who were also givena€50 cash tip.
Many of them complained they ‘felt offended as women and for their religion’.
While another girl said: ‘I thought we were going toaparty - we didn’t even getaglass of water or some salty snacks.’
‘One thing I do want to stress is that none of the girls spent the night there - I counted them all in and I counted them all out. There was nothing untoward it was simply an interesting evening of discussion.’
Mr Londero said thatasimilar event had been organised for tonight and tomorrow night.
He added: ‘I don’t know where or what will happen. All I know is that we have to be outside the office and coaches will pick the girls up.’
Before the summit today Italian Prime Minister Silvio Berlusconi, who has been involved inasleaze scandal after escorts were invited to parties at his official residences, embraced Gaddafi.
Gaddafi described Berlusconi as his 'close friend'. In return he told the Libyan dictator, who is famous for his long speeches: 'Just five minutes please, although we live in hope.'
Surprisingly, Gaddafi did manage to keep his speech to just ten minutes.
He said that 'all promises at previous summits had been in vain' but he praised Italy for 'playingasignificant role in fighting food security'.
Haffed Gadur, Libya’s ambassador to Italy, said: ‘The colonel wanted to meet the Italian girls to simply tell them that Islam was not against women.
Posted by Unknown | at 10:23 AM | 1 comments
ဘယ်တော့ မှအရှုံးမပေးနဲ့ ....
The half man withabig heart
လက်နှစ်ဖက်နဲ့ စဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်တဲ့ ဦးခေါင်းရှိသေးတယ်...
တရုတ်နိုင်ငံသား Peng Shuilin ဟာ ကားတိုက်ခံရအပြီးမှာ သူ့ အသက်ကိုကြိုးစားကုသကယ်
တင်ခဲ့ တဲ့ ဆရာဝန်တွေအနေနဲ့ သူ့ ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ တစ်ဝက် ( ငါးဆယ်ရာခိုင်နှုံးကို )ကို ဖြတ်
တောက်ဖယ်ရှားပစ်ခဲ့ ရတာတောင်မှ အသက်မသေပဲ ဆက်လက်ရှင်သန်နေနိုင်သေးတာမို့ 
ခွဲစိတ်ဆရာဝန်တွေဟာ အံ့ အားသင့် ခဲ့ ကြပါတယ်...
ကုန်တင်ထရပ်ကားတစ်စင်း အတိုက်ခံခဲ့ ရတဲ့ စီးပွားရေသမားတစ်ဦးဖြစ်သူ Peng Shuiling
ဟာ ကားတိုက်ခံရပြီးနောက် တရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်း ရှန်ကျင့် မြို့ ကဆေးရုံတစ်ရုံမှာ နှစ်နှစ်
နီးပါးမျှ တက်ရောက်ကုသပြီး အံ့ သြဖွယ်ကောင်းစွာ အသက်ရှင်ခဲ့ ပါတယ်...
ခွဲစိတ်ဆရာဝန်တွေဟာ သူအသက်ရှင်နိုင်ဖို့ အတွက် သူ့ ကိုယ်တွင်းကအဓိကအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း
တွေ၊ အကြောအရိုးစနစ်တွေကို အကြိမ်ကြိမ်ပြုခွဲစိတ် လမ်းကြောင်းပြောင်းပေးခဲ့ ရပါတယ်...
ဒါပေမယ့် အသက် ၃၇ နှစ်အရွယ်ရှိ စိတ်ဓါတ်ခိုင်မာ၊ ဇွဲရှိလှတဲ့ ထိုအမျိူးသားဟာ ဘ၀ကိုအရှုံး
မပေး၊လက်မမြှောက်ပဲ အပြင်းအထန်ကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့ လို့ သူ့ ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အထူးလျော့ ဈေး
စူပါမားကက် ( ကိုယ်တစ်ပိုင်းနဲ့ လူရဲ့ အထူးလျော့ ဈေးဆိုင် ) ကိုတောင်တည်ထောင်ပိုင်ဆိုင်
အခုဆိုယင် Peng ဟာ တစ်ခြားခြေပြတ်၊ လက်ပြတ် မသန်မစွမ်းဖြစ်နေသူများအတွက်တော့ 
တစ်ကယ့် ကို အားကျနမူနာယူထိုက်တဲ့စံပြလူသားတစ်ဦးဖြစ်နေခဲ့ ပါပြီ...
အရပ် ၂ ပေနဲ့၇ လက်မ သာရှိတဲ့သူဟာ ဘီးတပ်လက်တွန်းလှည်းနဲ့ လှည့် လည်သွားလာပြီး
မသန်မစွမ်းသူများ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက် ဟောပြောပို့ ချနေခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်...
Bujie ဆေးရုံကြီးရဲ့ ဒုတိယ အကြီးအကဲ Lin Lu က ” ကျွန်တော်တို့ အခုပဲ သူ့ ကို အထွေထွေ
ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်...အခုဆိုသူဟာ သူ့ အသက်အရွယ်နဲ့ တန်းတူ အ
မျိူးသားတွေထက် စာယင်ပိုိလို့ တောင်ကျန်းမာသန်စွမ်းနေပါသေးတယ်....တစ်ကယ်တော့ သူ
အံ့ ဖွယ်ပါပဲ....ပြောရယင် ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေ ဒီလောက်ဖြတ်တောက်ပစ်ခဲ့ ရ၊ ဆုံး
ရှုံးခဲ့ ရတဲ့ ကြားထဲက အသက်ရှင်တာဆိုလို့ သူတစ်ဦးပဲ ရှိပါလိမ့် မယ်....” လို့ ပြောကြားခဲ့ ပါ
သူ့ ကိုဂရုတစ်စိုက်နဲ့ ပြုစုစောင့် ရှောက်ခဲ့ ကြတာမှန်ပါတယ်...
ဒါပေမယ့် သူအသက်ရှင် ကျန်းမာခြင်းရဲ့ လျှိူ့ ဝှက်ချက်ကတော့ ( ဘယ်တော့ မှစိတ်ဓါတ်မကျ
ပဲ ) ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေထိုင်နိုင်တာပါပဲ....
အဲဒီလိုနေနိုင်ခဲ့ လို့ လည်း ဘယ်အရာကမှ သူ့ ကိုပျက်စီးဆုံးရှုံးအောင်မဆောင်ကြဉ်းနိုင်ခဲ့ တာ
ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခြမ်းလုံးမရှိတော့ တဲ့ သူတောင် စူပါမားကက် စတိုးဆိုင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်နိုင်သေးတာ
ကိုယ်ခန္ဓာချွတ်ယွင်းမှုမရှိတဲ့ သူတွေဆိုယင် ဒီထက်တောင် အတိုင်းအဆမရှိအောင်မြင်နိုင်
စိတ်ဓါတ်တော့ မကျလေနဲ့ ဗျိူ့ ....
BRAVE half man Peng Shuilin stunned surgeons by pulling through after they were forced to amputate 50 PER CENT of his body.
The miracle businessman, who was crushed byatruck, spent nearly TWO YEARS in hospital in Shenzhen, southern China.
Doctors had to performaseries of operations to re-route nearly every major organ or system inside his body.
But the amazing 37-year-old battled back and has even set up his own cut-price supermarket — the Half Man Half Price Store.
And now Peng is being used asarole model for other amputees.
At just 2ft 7ins tall he gets around inawheelchair and gives lectures on recovering from disability.
Bujie Hospital vice president Lin Liu said: "We've just given himacheck up and he is fitter than most men his age. He is amazing and the only person in the world to survive having so much of his body amputated.
"He had good care but his secret is his cheerfulness - nothing ever gets him down."
Posted by Unknown | at 8:38 AM |0comments
Boss? I’m inaspot of bother
အသက်မသေပဲပြန်လည်ကျန်းမာလာတာကတော့ တစ်ကယ့် ကို
အင်္ဂလန်နိုင်ငံကကုန်တင်ထရပ်ကားမောင်းသူတစ်ဦးဟာ ကားတိုက်မှုဖြစ်ပြီး သူ့ ရင်ဘက်ထဲကို
သံပိုက်လုံးကြီးတစ်ခု ထိုးစိုက်ဝင်ရောက်ခဲ့ တာတောင်မှ သူ့ ရဲ့ အလုပ်ရှင်သူဌေးကို ” ဆရာ...
ကျွန်တော်တော့ ဒုက္ခတွေ့ နေပြီ....” လို့ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ဖုံးဆက်အကြောင်းကြားခဲ့ ပါ
တစ်ကယ်ကို သတ္တိရှိပြီးရဲရင့် တဲ့Jason Ripley ဟာ အလျား ၈ ပေ ရှိတဲ့ သံပိုက်လုံးကြီး သူ့ 
ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲ ထိုးစိုက်ဝင်နေတာတောင်မှ စိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ထားနိုင်ပါသေးတယ်...
သူအဲဒီလို သံပိုက်ချောင်း ထိုးစိုက်ခံနေရချိန်မှာ ဘယ်သူမှအဲဒီအဖြစ်အပျက်ကိုမတွေ့ လို့ သူသေ
သွားနိုင်တယ်ဆိုတာ သဘောပေါက်ခဲ့ တယ်...
ဒါကြောင့် သူ့ အလုပ်ကိုဖုံးဆက်ပြီး..” ကျွန်တော်တော့ ကားအက်စီးဒင့် နည်းနည်းဖြစ်သွားတယ်...
ဒုက္ခတော့ ဖြစ်နေပြီ...” လို့ ပြောခဲ့ တာပါ....
အသက် ၃၉ နှစ်ရှိ Jason ဟာ သူနေထိုင်ရာအရပ်ဖြစ်တဲ့Karlington မှာသူမောင်းလာတဲ့ ထရပ်
ကား ဟာ ပျက်စီးပြီးပုံသဏ္ဍာန်မမှန်ဖြစ်နေတဲ့ လမ်းဘေးက ယာဉ်ကြောမတိမ်းချော်စေရန် တား
ဆီးထားတဲ့ အကာအရံသံတန်းကိုဝင်တိုက်မိပြီး အခုလို တံစို့ ထိုးသလိုသူ့ ရင်ဘတ်ကို သံပိုက်လုံး
ကြီး ထိုးစိုက်ဝင်ရောက်သွားခဲ့ တာပါ...
သူဟာယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်ပွားပြီး တစ်ချိန်လုံးသတိရှိနေခဲ့ ပြီး၊ ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေက သူ့ 
ရင်ပတ်ထဲစိုက်ဝင်နေတဲ့သံပိုက်လုံးကြီးကိုဖြတ်တောက်နေချိန်မှာ သူရဲ့ အတူနေအမျိူးသမီး
Helen Toddနဲ့သူတို့ ရဲ့ သားတွေဖြစ်တဲ့ အသက် ၁၉ နှစ်ရှိ Joshua၊ အသက် ၁၁ နှစ်ရှိ Jay
တို့ အကြောင်းကိုပဲတွေးနေခဲ့ တာပါတဲ့ ...
အဲဒီနောက် သူ့ ကို Middleborough က James Cook ဆေးရုံကြီးကိုပို့ ဆောင်လိုက်ကြပါတယ်...
” အံ့ သြစရာပါပဲဗျာ...ကျွန်တော်ဖြင့် ဘာမှနာကျင်တာတွေမခံစားရဘူး...ကောင်းကင်ကိုပဲမော့ 
ကြည့် နေမိတာပါပဲ...” လို့ သူကပြောပါတယ်...
ခွဲစိတ်ဆရာဝန်တွေက အဓိကအရေးကြီးတဲ့ ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေကို မထိပဲ ၀င်
ရောက်ထိုးစိုက်နေတဲ့ သံပိုက်ချောင်းကြီးကို ခွဲစိတ်ဖယ်ထုတ်ပေးခဲ့ ကြပြီး၊ လပေါင်းအတန်ကြာ
မှာတော့ သူဟာလုပ်ငန်းခွင်ကို ပြန်လည်ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်ခဲ့ ပါတယ်...
အဲဒီအဖြစ်အပျက်ဟာ လွန်ခဲ့ တဲ့ နှစ်ကဖြစ်ခဲ့ ပေမယ့် အဲဒီအချိန်တုံးကရိုက်ထားခဲ့ တဲ့ သူ့ ရဲ့ 
ဓါတ်ပုံတွေကိုတော့ မနေ့ ကမှ ထုတ်ပြန်ခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်...
အဲဒါကလည်း သူ့ အသက်ကိုကယ်တယ်ပေးနိုင်ခဲ့ တဲ့ Great Nort Air Ambulance အရေးပေါ်
ကယ်ဆယ်ရေး အဖွဲ့ အတွက် ရန်ပုံငွေရှာဖွေရေးအတွက်ကူညီနိုင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်...
တစ်ကယ့် ကို သေကံမရောက်သက်မပျောက်ပါပဲဗျာ...
A TRUCKER was speared byapole and calmly rang his boss to say: "I'm inaspot of bother."
Brave Jason Ripley kept his cool after the 8ft shaft went through his body.
As he lay impaled he realised nobody had seen the freak accident and he was going to die.
So he phoned his work to say: "I've hadabit of an accident - I'm inaspot of bother."
Jason, 39, was skewered when his truck hitawonky crash barrier in his home town of Darlington, Co Durham.
He stayed conscious - thinking of partner Helen Todd, 38, and sons Joshua, 19, and Jay, 11 - as firemen cut the pole to 4ft. Jason was flown to James Cook Hospital, Middlesbrough.
He said: "Strangely I felt no pain. I was just staring up at the sky."
Surgeons took out the pole, which missed his vital organs, and he was back at work in months.
The accident happened last year but Jason only released the pictures yesterday to raise funds for the Great North Air Ambulance, saying the service saved his life.
Posted by Unknown | at 2:09 AM |2comments
တို့ ရဲ့ ဘွားဘွား...
” ကောင်းမွန်စွာထွန်ယက်စိုက်ပျိူး၍တိုးပွားလော့ ....” ဟူသော ပညတ်တော်မှာကြားချက်ကို
Krishevsky မိသားစုက တိတိကျကျ တစ်သွေမတိမ်း လိုက်နာခဲ့ သည်ဟုဆိုလျှင် လွန်အံ့ မထင်
လွန်ခဲ့ သည့် စနေ နေ့ က ၎င်းမိသားစု၏ ဘွားဘွားကြီး Rachel Krishevsky ဟာအသက် ၉၉
ဘွားဘွားကြီးကွယ်လွန်ချိန်မှာ သား၊သမီး၊မြေး၊မြစ်၊တီ၊တွတ် အပါအ၀င် မျိူးဆက်သစ်အားလုံး
စုစုပေါင်း ၁၄၀၀ မျှသောအရေအတွက်ရှိ မိသားစုကြီးကိုချန်ထားရစ်ခဲ့ လေသည်....
ဘွားဘွား Krishevsky ဟာ အသက် ၁၉ နှစ်အရွယ်မှာပဲ ၀မ်းကွဲအစ်ကိုတစ်ဦးဖြစ်သူ Yitzhak
နဲ့ လက်ထပ်ခဲ့ တာပါ...
သူတို့ နှစ်ဦးကနေ သားခုနှစ်ယောက်၊ သမီးလေးယောက် လူ့ လောကကို ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ ပါ
တယ်...သူတို့ ရဲ့ အစဉ်အဆက်လက်ခံကျင့် သုံးလာခဲ့ တဲ့ဓလေ့ ထုံးတမ်းအရဘွားဘွား Krishevsky
ဟာ သူမရဲ့ သားသမီးတွေကို ရင်သွေးဟူက ရှုမ၀၊ သားသမီးဆိုတာ ရတနာ ဟု သဘောထား
ရန်သွန်သင်ခဲ့ သဖြင့်သူမ၏သားသမီးများက ထပ်မံ၍ သားသမီးပေါင်း ၁၅၀ ဦး ထပ်မံမွေးဖွား
ထို ၁၅၀ မျှ သော သာသမီး( မြေး ) များကလည်း အသေအချာပင် ထွန်ယက်စိုက်ပျိူးပြီး တိုးပွား
လာခဲ့ ရာ မျိူးဆက်သစ်ပေါင်း ၁၀၀၀ ထက်မနည်း ပေါ်ထွန်းမွေးဖွားလာခဲ့ သည် ဟူသတတ်....
ဤသို့် ဖြင့် ဘွားဘွား Krishevsky ၏ မိသားစုအသိုက်အမြုံကြီးတိုးပွားခဲ့ ရာ သူမ မကွယ်လွန်
ခင်အထိ သူမတွင်မြေးများကမွေးသောမြစ်များပင် ရာနှင့် ချီပြီးရှိလာခဲ့ လေသည်....
သို့ ဖြင့်သူမချစ်ခင်မြတ်နိုးသည့်သားသမီး၊မြေးမြစ်များ ၀ိုင်းရံလျှက်ပင် ဘွားဘွားကြီး Krishevsky
တစ်ယောက် လူ့ လောကမှအပြီးအပိုင်ထွက်ခွာသွားခဲ့ ရှာလေသည်...
မွေးဖွားခဲ့သော မျိူးဆက်သစ်များမှာ များပြားလွန်းလှသဖြင့် ဘယ်သူက ဘယ်နှစ်ယောက် စသည်
ဖြင့် အတိအကျပင်ရေတွက်ခြင်းငှာ မစွမ်းနိုင်တော့ ပေ...
အကြမ်းအားဖြင့် သာ အယောက် ၁၄၀၀ ခန့် ရှိမည်ဟုခန့် မှန်းရကြောင်း ဘွားဘွားကြီးရဲ့ မြေး
တစ်ဦးက ပြောခဲ့ ပါတယ်...
ဘွားဘွားအနေနဲ့ သက်တမ်းပြည့် ( တစ်ကယ်တော့ ကျော်တယ်လို့ တောင်ဆိုနိုင်ပါတယ်...)
အသက်ရှင်နေထိုင်သွားခဲ့ ရပေမယ့်မိသားစုကြီးကတော့ အဘွားကို နှမြော တသ ကြေကွဲ
အဘွားဟာ သူမရဲ့ ဘ၀တစ်လျှောက်လုံးနီးပါး ဂျေရုဆလင်မြို့ က Mahane Yehuda လေဟာ
ပြင်ဈေးကြီးနားမှာ နေထိုင်ခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်....
” အဘွားဟာ ဘုရားသခင်ကို အလွန်ပျပ်ဝပ်ကြည်ညိုခဲ့ တာ သူ့ ဘ၀တစ်လျှောက်လုံးပါပဲ...
သူမရဲ့ အိမ်တံခါး ကို အိမ်ခြေယာခြေမဲ့ သူများနဲ့ ဈေးအနီးက ဆင်းရဲချိူ့ တဲ့ သူများအတွက် လာ
ရောက်စားသောက်နိုင်ဖို့ အတွက် အမြဲပဲတံခါးဖွင့် ထားခဲ့ တာပါ....” လို့ အဘွားရဲ့ မြေးတစ်ဦးက
” အဘွားစာ သမ္မာကျမ်းစာရဲ့ဆာလံ အခန်းကို အလွတ်ရပြီး မိသားစုကြီးရဲ့ သာရေး၊ နာရေး
အခန်းအနားတွေအားလုံးမှာ မပျက်မကွက်ပါဝင်ခဲ့ တာ လွန်ခဲ့ တဲ့ နှစ်နှစ်အထိပါပဲ....သူမရဲ့ 
သားသမီး၊ မြေးမြစ်တွေအားလုံး ကိုလည်းမှတ်မိ သိရှိနေပါသေးတယ်...
သူမရဲ့ ဘ၀ဟာစွမ်းဆောင်မှုများနဲ့ ဖြောင့် မတ်မှန်ကန်တည်ကြည်မှု၊ မေတ္တာ၊ဂရုဏာ တရားတွေ
ပြည့် ဝမှုတို့ အတွက် ဂုဏ်ယူရပါတယ် ....” လို့ မြေးများကဆိုပါတယ်...
ယခုလို သားသမီးမြေးမြစ်တွေ အမြောက်အများမွေးထုတ်နိုင်ခဲ့ တာတောင်မှ အဘွားထက်စံ
ချိန်ချိူးနိုင်တဲ့ သူရှိနေပါသေးတယ်တဲ့ .....
အဘွားထက်ပိုပြီး မြေးမြစ်၊ တီ၊ တွတ်၊ ကျွတ် အထိရှိတဲ့အသက်ရှင်နေဆဲ ဘိုး၊ ဘွား သက်ရှည်
တစ်စုကတော့ဂျေရုဆလင်မြို့ ရဲ့Mea Shearim အရပ်မှာနေတဲ့Hassidic မိသားစုပါ...
နောက်မိသားစုကတော့လစ်သူယေးနီးယား ဂျူးအနွယ်တစ်ခုရဲ့ ခေါင်းဆောင် ရဟူဒီဘုန်းတော်
ကြီး Yosef Shalom Elyashiv ရဲ့ မိသားစုပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့ ....
အဲဒီမိသားစုတွေရဲ့ လူဦးရေဘယ်လောက်လဲဆိုတာတော့ ဖော်မပြထားတဲ့ အတွက်အတိအကျ
မသိရပေမယ့် ....၁၄၀၀ လောက်ရှိတဲ့ မိသားစုအနွယ်ထက်ပိုများတယ်ဆိုတော့ ....
အောင်မယ်လေး....လို့ သာ တ လိုက်မိချင်ပါတော့ တယ်...
ကောင်းစွာထွန်ယက်စိုက်ပျိူး၍ တိုးပွားလော့ ....တဲ့ ..
ပညတ်တော်ထဲမှာ ပါတာတဲ့ ....
Posted by Unknown | at 11:54 PM |2comments
Labels: news : crownheights.info
၀က်တုပ်ကွေးမကူးစက်မပျံ့ ပွားသည့် ပရိတ်ရေဖျန်းစက်
'Holy water' machine aims to stem swine flu'
အီတလီနိုင်ငံမှ တီထွင်သူတစ်ဦးဟာ ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုနှင့် တီထွင်ဖန်တီးနိုင်မှု တို့ ကိုပေါင်းစပ်ပြီး ( ဘာသာရေးနဲ့ သိပ္ပံ ပညာ ) ခရစ်ယာန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းများရဲ့ အစဉ်အလာကိုဆက်လက်
ထိန်းသိမ်းစေနိုင်ဖို့ အတွက် ပရိတ်ရေ များအတူတစ်ကွပက်ဖြန်းသုံးစွဲခြင်းဖြင့် ဝက်တုပ်ကွေးရော
ဂါကူးစက်ခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက် လျှပ်စစ်ရေသန့် ဖြန်းပေးနိုင်တဲ့ စက်ကိုတီထွင်ခဲ့ ပါတယ်....
အီတလီနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း၊ Fornaci di Briosco မြို့ မှာ သုံးစွဲနေပြီဖြစ်တဲ့ အဆိုပါ ပရိတ်ရေသန့် 
စက်ဟာ အများပြည်သူသုံး သန့် စင်ခန်းများမျာ တပ်ဆင်ထားတဲ့ ဆပ်ပြာရည်ညှစ်ပေးတဲ့စက်
ကဲ့ သို့ ပင် ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကိုလာရောက်သူများက ၎င်းတို့ ရဲ့ လက်ကို စက်အောက်သို့ ပြ
လိုက်ရုံမျှဖြင့်သန့် ရှင်းစင်ကြယ်သော ပရိတ်ရေများအလိုအလျောက်ထွက်ကျလာမှာဖြစ်ပါတယ်...
” ဒါကတော့ အနည်းငယ်ဆန်းသစ်တီထွင်ထားတာပါ...ပထမတော့ ဒီလိုနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ
တီထွင်ဆန်းသစ်မှုကို ( ဘာသာရေးနဲ့ လိုက်လျောညီထွေ ရှိပါ့ မလားလို့ ) လူတွေက စိုးရိမ်
အခုတော့ သူတို့ တွေ ကျေကျေနပ်နပ်၊ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကြီးကိုသုံးစွဲနေကြပါပြီ.... သုံးနေ
ကျဖြစ်လို့ လည်း ကျင့် သားရသွားကြပါပြီ....” လို ဖာသာ Pierangelo Motta ကပြောပါတယ်.....
၀တ်ပြုဆုတောင်းဖို့ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကိုလာရောက်သူတွေရော၊ ပြီးဆုံးလို့ ပြန်လည်ထွက်ခွာ
သူတွေပါ သူတို့ ရဲ့ လက်တွေကို ဘုန်းတော်ကြီးတွေ ရွတ်ဖတ်သရ္ဇျာယ်ထားတဲ့ ပရိတ်ရေထည့် 
ထားတဲ့ ဇလုံတွေ၊ ကန်ငယ်တွေထဲမှာ နှစ်ပြီး သူတို့ ရဲ့ ကိုယ်မှာ ကြက်ခြေခတ်၊ လက်ဝါးကပ်တိုင်
ဒါပေမယ့်လူ ၁၅ ဦး ၀က်တုပ်ကွေးရောဂါကြောင့် သေဆုံးသွားခဲ့ ရပြီးနောက် လူတွေဟာ အဆို
ပါရောဂါကူးစက်ခံရမှာကို အလွန်ကြောက်ရွံ့ ထိတ်လန့် ကြလို့စုပေါင်းသုံးစွဲရတဲ့ ရေကန်၊ ရေ
ဇလုံတွေမှာ လက်တွေကို ရေမနှစ်ကြတော့ ပါဘူး...
” အခုလိုလုပ်လိုက်တာ အတော့် ကိုကောင်းပါတယ်...” လို့ဘုရားကျောင်းကိုလာရောက်ဝတ်
ပြုဆုတောင်းသူ Marta Caimm က ကျောင်းဝင်းထဲကိုဝင်အလာမှာ ပြောပြပါတယ်...ဒီလို
စီစဉ်ထားတော့ ဝက်တုပ်ကွေးရောဂါ ကူးစက်ပျံ့ ပွားမှာ မစိုးရိမ်ရတော့ ပါဘူး...ဒါဟာအခြေအ
နေနဲ့ အချိန်အခါကိုလိုက်ပြီး အဆင်ပြေအောင်လုပ်လိုက်တာပါပဲ...လို့ သူမကပြောပြခဲ့ ပါတယ်...
၀က်တုပ်ကွေးရောဂါ ကူးစက်ဖြစ်ပွားမှာစိုးရိမ်တာနဲ့ရိုးရာအစဉ်အလာတွေတိမ်ကော ပပျောက်
ပျက်စီးသွားမှာစိုးလို့အခုလို အလိုအလျောက် ပရိတ်ရေသန့် စက်( ရေဖြန်းစက် ) ကိုတီထွင်
ခဲ့ တာဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါစက်ကို တီထွင်သူ Luciano Marabese ကရှင်းပြခဲ့ ပါတယ်...
စိတ်ကူးကောင်းတဲ့ သူ့ အတွက်အခုတော့ ငွေတွေဝင်လာမစဲ တစ်သဲသဲဖြစ်နေပါပြီ....
၀က်တုပ်ကွေးရောဂါကူးစက်ပျံ့ ပွားမှာစိုးလို့မီလန်မြို့ က ကက်သီဒရယ်ကျောင်းတော်ကြီးက
စလို့လက်ဆေးကန်ထဲမှာ အတူတစ်ကွ လက်ရေနှစ်ခြင်းကိုတားမြစ်လိုက်တဲ့ သတင်းပေါ်
ထွက်လာပြီးနောက် သူ့ ရဲ့ အလိုအလျောက်ပရိတ်ရေဖြန်းစက်အတွက် (၀ယ်ယူဖို့ )အမှာစာ
တွေဟာ တစ်ဟုန်ထိုးတိုးတက် များပြားလာပါတော့ တယ်...
” အခုတော့ တစ်ကမ္ဘာလုံးကနေကို မှာကြားလာနေပါတော့ တယ်....” လို့ သူကပြောပြ
Catholics entering and leaving churches usually dip their hands into fonts full of holy water - which has been blessed byapriest - and make the sign of the cross. But fear of contracting the H1N1 virus has led many in Italy - where some 15 people have died of swine flu - not to dip their hands in the communal water font.
Posted by Unknown | at 11:55 PM |4comments
Labels: news : the west australian
Who’s the Fastest and Who’s the Slowest
ဒါကတော့ ဗဟုသုတလေးပေါ့ ...
အမြန်ဆုံးကတော့ ချီတာကျားသစ်ပါတဲ့ ...
အနှေးဆုံးကတော့ သိကြတဲ့ အတိုင်း ခရု၊ပက်ကျိပေါ့ ....
လို့ ဗဟုသုတတော့ ရမှာပါ....
Then click on ‘see more’. It is really interesting, personally, I learned many new things for myself.
Posted by Unknown | at 9:42 AM | 1 comments
Labels: facts : knowledge
Pope John Paul 'would whip himself before he ordai...
ရည်းစားနဲ့ လွန်ကျူးမိလို့ ကျောက်တုံးဖြင့် ထုသတ်ပြီ...
Annoyed with Old Pick-up Car, Nepal Minister Slaps...
Jesus found on naan bread
တစ်နေ့ ကို အကြိမ်ပေါင်း ၁၂၀၀၀ နှာချေနေရသူ ၁၂ နှစ်သ...
နော်ဝေနိုင်ငံမှ အသည်းယားစရာ၊ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် ကျော...
Uganda school exam births shock
အနာဂတ်ရဲ့ ခေတ်မှီစက်ဘီး.... Modern Bike
Muddy miracle worker
Transsexual Jesus play sparks candle-lit Christian...
Man finds Jesus in truck window
ဒန့် ကျွဲပင် ပုခက်ဆင်လေပြီ....
Man is allergic to his wife
ပိုင်ပြီဟုတော့ ဖြင့် မတွက်လေနှင့် ....